သစ်စာမဖောကျခွငျးသျောလညျး ဖောကျရခွငျး – My Blog
“မင်ျဂလာပါ” ( ဒျေါ နီနီ ဒျေါသငျးသငျး) ညီအမ နှဈရောကျ ကနြျော လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅/ ၂၀၁၆လောကျက ရနျကုနျက ကောငျမလေး တဈယောကျနဲ့ အိမျထောငျ ကခြဲ့ပါတယျ ကနြျောတို့ နှဈယောကျဟာ အေးအတူ ပူအမြှ အရမျးလဲ ခဈြကွပါတယျ ပွီရငျ နာလညျမှု့ လဲ ရှိကွပါတယျ ကနြျောရဲ့ မိနျးမက အရမျး ကနြျောကို နာလညျပတေယျ ခဈြလဲ ခဈြတယျ အားလဲ ကိုးတယျ ကနြျောမိနျးမက ခမျြးသာတဲ့ မိသာစုကပါ အမေ အဖေ မရှိတော့တဲ့ မိနျးကလေး တဈယောကျပါ သူဘဝအတှကျ ကနြျောဟာ အရငျးနှီးဆုံး မိတျဆှေ တဈယောကျပါပဲ ကနြျောနဲ့ တနျးတူ ဆိုသလို သူမှာ သူအမရေဲ့ အမတှေ ဖွဈတဲ့ ဒျေါ နီနီ နဲ့ ဒျေါသငျးသငျးဆိုတဲ့ အသကျ ၃၆နှဈ အရှယျ အပြိုကွီးတှေ ရှိပါတယျ လောကကွီးမှာ မိနျးမသား နှဈယောကျထဲ ကွိုးစားရုံကနျနကွေတဲ့ မိနျးမတှပေါ ကနြျောနဲ့ ကနြျောမိနျးမ ကွိုကျနတေော့ ဒျေါ နီနီ နဲ့ ဒျေါသငျးသငျးက သိတော့ သူတို့တူမကို ကနြျောနဲ့ အဆကျအသှယျ ဖွတျဖို့ မဖွတျရငျ မငျးပါ အိမျပျေါကဆငျးရမယျမငျးအမေးက မသခေငျ ငါတို့ နှဈယောကျ ကို အပျထားခဲ့ ကွတာ ဆိုပွီ အမွဲ ပွောတယျ တဲ့ ဒါပမေဲ့ ကနြျော မိနျးမက သူတို့ ညီအမ နှဈယောကျ နဲ့ ရှဘေ့ဝ က ရနျသူတှေ လား မသိ အမွဲ ရနျဖွဈနကွေသူတှပေါ
ဒျေါ နီနီက ငှတှေေ သိနျးပေါငျ သောငျးခြီပွီ စကျရုံ ဖှငျ့ခွငျတဲ့ လူတှေ ကုမ်မဏီ ဖှငျ့ခွငျတဲ့ လူတှကေို ငှတေိုး ခြီးစားတဲ့ သူပါ ငှေ အရမျး အမွတျထှကျပါတယျ ဒျေါသငျးသငျးကတော့ စကျောဈေး လဟောပွငျ ဈေးဘကျမှာ ရှေ ဆိုငျ ပလကျတီနမျ ဆိုငျ အပိုငျဖှငျ့ ထားတဲ့သူပါ ဒီလောကျခမျြးသာတဲ့ ညီအမ နှဈယောကျကို စုံကနျပွီ ကနြျောနဲ့ အတူနဖေို့ သူရဲ့ အဝတျထုပျကလေး ယူပွီ ထှကျလား တဲ့ နကေ့ ကနြျောမိနျးမကို အိမျပွနျလှတျရမလိုလို ကနြျောကို ခဈြလှနျးတဲ့ မိနျးမမြိုး နောကျတခါ မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ အတှေးမြိုး လဲ ဝငျဝငျလာတော့ ကနြျော တကယျ ဝခှေဲမရ ဖွဈရပါတယျပွီရငျ ကနြျောမိနျးမကို အပြိုစငျဘဝကို ကနြျော ရထားတာပါ ဘာမှ ငွငျးစရာမလိုဘူး ကနြျော မိနျးမတဈယောကျ တော့ လုပျကွှနေိုငျတယျ ဆို ပွီ ကနြျော ရပျကှကျ ရုံးမှာပဲ လကျထပျခဲ့ကွပါတယျ
ကနြျော တို့ လကျထပျပွီတော့ နစေရာ က မရှိတော့ မင်ျဂလာဒုံဘကျ အခနျးလေးတှေ ရှိတယျ မငျးတို့. နနေိုငျရငျလာ ခဲ့ ၃၅၀၀၀ကပျြပဲ ရှိတယျ ဆိုတော့ ကဲ မထူးဘူး မိနျးမရေ အဲ့ဘကျသှားနရေမှာပဲ ဆိုပွီ သူငယျ ခငျြးကလဲ အလုပျလုပျရငျ ခငျမငျတဲ့ သူငယျ ခငျြး က ကနြျောကို အခနျးလေး ရှာပေးထားပါတယျ ဟိုရောကျတော့ အဆောငျမဟုတျဘဲ အိမျသေးသေးလေးတှရှေိတယျ ရေ မီ အစုံနဲ့ အဲ့အိမျတော့ ၄၀၀၀၀ကပျြပေးရမယျတဲ့ ကနြျောမိနျးမကလဲ ရတယျ အဲ့အိမျလေးပဲယူမယျတဲ့ ကနြျောမှာလဲ အိပျထဲ လုံးဝငှမေရှိပါ ဘူး လကျထဲ ၃၅၀၀နဲ့ မိနျးမခိုးပွတော ငါတဈယောကျပဲ ရှိတယျ သို့ပမေဲ့ မိနျးမကို သူအဒျေါတှေ မုနျ့ဖို ပေးတာတှေ စုထားတဲ့ ငှေ ၃သိနျးကြျော ပါတယျတဲ့ ပွီရငျ အမအေမှေ နကပျ တစုံ ပါတယျ တဲ့ ကဲ ဒါဆို ၃သိနျးနဲ့ ပစ်စညျ ပစ်စရံတှေ ဝယျကွမယျ ဆိုပွီ မင်ျဂလာဒုံ ဈေးဘကျကို ပစ်စညျးတှေ အိပျယာတှေ အိုးတှေ ခှကျတှေ လြောကျဝယျကွပါတယျ ကနြျောမိနျးမဟာ ပြျောရှငျနတေဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ တကယျ သနာစရာလေးပါ ကနြျောဟာလဲ အလုပျမရှိ အကိုငျမရှိ ရှရေ့ကေို ကနြျောတော့ တှေးတောပွီ စိတျက အလိုလိုကွောငျလာတယျ တာဝနျယူစိတျတှေ ကငျမဲ့လာတယျ
ဒါပမေဲ့ ကနြျောကို ယုံကွညျ့လှနျးတဲ့ ကနြော့ဇနီးခြျော မကျြနှာကို မွငျလိုကျရငျ ယုံကွညျမှု့တှေ ရှိရှိလာတယျ သူပါလာတဲ့ ငှလေေး တှလေဲ တပတျ နှဈပတျ ဆိုတော့ တဖွညျ တဖွညျနညျးနညျးလာပွီ ကနြျောလဲ အလုပျရှာ တာ အလုပျမရသပေါဘူး ကနြျောမိနျးမ ရဲ့ အဒျေါတှကေလဲ ဆကျသှယျမလာ ခဲ့ပါဘူး ကနြျောမိနျးမလဲ မမြျောပါဘူး သူ့ဘဝမှာ ကနြျောဘေးမှာရှိနရေငျပဲ သူကနြေပျနတေဲ့ သူပါ ဘေးမှာရှိနရေုံမကဘူး ကနြျောကို ပိုငျဆိုငျနရေပွီ ဆိုတဲ့ စိတျရှိနရေငျပဲ ပြျောရှငျနတေတျသူပါ ကနြျောတို့ တလပွညျ့တော့ အဆောငျခက ၄၀၀၀၀ပေးဖို့ နညျးလာပွီ သူမှာလဲ ငှကေ ၅သောငျကြျောပဲ ရှိတော့တာ အဆောငျခသာ ပေးလိုကျရငျ ကနြျောတို့ စားဝတျနရေေ မပွလေယျနိုငျ ဒါနဲ့ သူငယျခငျြးအိမျ သှားပွီ အလုပျလေးဘာလေး မြားရှိနိုငျမလား မေးရငျပေါ့ သူငယျခငျြးကလဲ ငါ မှာ ကုမ်မဏီ အဆကျအသှယျ တော့ မရှိဘူး ပနျရံ မွတေူး တှပေဲရှိတာတဲ့ ကနြျော ငွငျခွငျပမေဲ့ မိနျးမမကျြနှာ ကွညျ့ပွီ ဩျော ငှရေ ရငျ ပွီရျောကှာ ဆိုပွီ လုပျမယျကှာ ဘာပဲလုပျရလုပျရ ဆိုပွီ ကနြျော ငှေ ဘယျလောကျရမလဲ မေးတော့ ၃၀၀၀ ၃၅၀၀ပဲရမယျတဲ့ အလုပျကွမျးသမားက တဲ့ ကဲမထူဘူး လုပျမယျဆို ပွီ
အေး အေး ဒါဆို မနကျ ဝငျချေါမယျတဲ့ သူငယျခငျြးက အေးအေးဝငျချေါကှာလို့ မိုးလငျးတော့ ကနြျောအလုပျ လိုကျသှားပါတယျ ကနြျော မွတှေေ တူးရတယျ တှငျးအနကျကွီးတှေ တူးရတယျ ပငျပနျတာနဲ့ ငှရေတာနဲ့ မကာမိပါဘူးကှာ အလုပျသမာတဈယောကျ ရဲ့ တရကျလုပျခ ၃၅၀၀ဆိုတာ နညျးလှနျးပါတယျကှာ ကနြျော အဆငျပွရေငျ ပွီရောကှာဆိုပွီ ရကျ၂၀ ၃၀လောကျ ကြိတျမှိတျ လုပျ လိုကျတယျစုမိဆောငျမိတာလေးနဲ့ ကနြျောတို့ အဆငျပွအေောငျ ပွနျလုပျဖို့ မိနျးမနဲ့ တိုငျပငျကွတာပေါ့ မိနျးမကလဲ ယောကြာင်္း ရယျ ပငျပနျးရငျလဲ အလုပျသဈရှာပါ မိနျးမလဲ စတိုးဆိုငျမှာ အလုပျလုပျဖို့ ပွောထားတယျ အိမျဘေးနားက အမကွီးက ပွောပမေယျ လို့ ပွောထားတယျတဲ့ ကနြျောလဲ စာဝတျနရေေ ခိုကျခဲနတေဲ့ အခြိနျမှာ မိနျးမကို တာခွငျပမေဲ့ ကနြျောလကျခံရပါတယျ သူ ကတော့ တနကေုနျ၂၀၀၀လောကျပဲ ငှရေပါတယျ ကနြျောလဲ ၃ရကျ ၄ရကျလောကျ နားပွီ အိမျရဲ့ အိမျ၅လုံးကြျောလောကျမှာ ကှမျးယာဆိုငျလေး ရှိတော့ ကှမျးသှားဝယျစားရငျးနဲ့ ဇယျခုံလဲ ရှိတော့ ဇယျတောကျ နတေဲ့ အကိုကွီးတဈယောကျက သဘောကောငျးတယျ စကားတှေ ပွောတယျ ညီးလတေို့ပွောငျလာတာ အဆငျပွတေယျ မလား ငါတို့ရပျကှကျက အေးခမျြးတယျ ဘာတယျ ညာတယျနဲ့ စကားတှေ ပွောနကေတြာပေါ့ ပွီတော့ စီပှာရေ အကွောငျးမေးတာပေါ့
စီပှာရေး အကွောငျးမေးတော့ အကိုရယျ အဆငျမပွပေါဘူး အလုပျကလဲ ရှားတယျ ပွီရငျ ရှိတဲ့ အလုပျကလဲ အရမျး ပငျပနျးလှနျးတော့ မခံနိုငျဘူး မွတေူးရတာ လို့ ဒါနဲ့ အကိုကွီးက ဒါဆို အကို အလုပျပေးမယျ ညီလေ လုပျမလားတဲ့ ဟာ အဆငျပွရေငျတော့ လုပျခွငျတယျလို့ ဒါဆို လာလာ အကို အိမျသှားမယျ အလုပျကွောငျ ဆှနှေေးရအောငျတဲ့ ကနြျောလဲ သူနောကျက လိုကျသှားတာပေါ့ ကဲ ညအေကိုတို့ အလုပျက ပိုကျဆံတော့ရတယျ ဒါပမေဲ့ ညအေဆငျပွပေါ့မလားတဲ့ ပွပေါတယျ အကိုပွောပါ ဥပဒနေဲ့ လှတျကငျရငျ ကနြျော အကုနျလုပျတယျ လို့ အပေါအပေါတဲ့ ဒီမှာညီလေ အကိုတို့အလုပျက ညဘကျအလုပျဆငျး ရမယျ တဈညကို ၃သောငျး ၄သောငျးလောကျရတယျတဲ့ ဟာ ဘာအလုပျလဲ လုပျမယျ လုပျမယျ အကိုလို့ ကူညီးပပေါလို့ အကှော မငျးမှာ မိနျးမရှိတော့ အဆငျပွပေါ့မလားတဲ့ ပွပေါတယျလို့ ကနြျောအလုပျလုပျတာ သူအတှကျပဲ ဟာလို့ အကှော ဒါဆို မငျးကို အကိုပွောမယျ မငျးဂဂြေလိုးဆိူတာ ကွားဘူးလားတဲ့ ဟအေ ဘာလဲ အကိုလို့ အဲ့အလုပျက မငျးရုပျရညျ မငျးခန်ဒာ အခြိုးအသားနဲ့ ဆို အဆငျပွတေယျ တဲ့ ဟုတျ အကို ဂဂြေလိုး အလုပျက ဘာလဲ ဥပဒနေဲ့ လှတျကငျလာ ဘယျလိုလဲ ကနြျောလဲ သရှောမေးတာပေါ့ သူက ညီလေး တိုးတိုးပွော အဲ့အလုပျက ဥပဒနေဲ့ ဘာမှမဆိုငျဘူးတဲ့
အငျး အငျး ဒါဆို ပွောလို့ အကို အေးပါ အေးပါ ဆိုပွီ အမှနျတော့ ဂဂြေလိုးဆိုတာ ဖာသညျတှလေို့ လာတဲ့ဧညျ သညျကို မငျးအတူတူ အိပျပေးရမှာတဲ့ ဟာ အကို ဖာခေါငျးလာလို့ ဟာမဟုတျဘူး ဖာခေါငျးဆိုတာ ကောငျမတှကေို လိုးမဲ့လူ ရှာပေ ရတဲ့ လူကို ချေါတာတဲ့ အခုက မိနျးမတှကေ သူတို့ ယောကြာင်္းနဲ့ ဝေးနလေို့ ယားလို့ ခံခွငျလို့ အခကြေးပပွေီ လာခံတဲ့ မိနျးမတှကေို နငျအတူတူအိပျပေးရမှာတဲ့ ဒါကို ဂဂြေလိုးလို့ချေါတာတဲ့ ဟာအကို အဲ့လို မိနျးမမြိုးရှိလို့လာလို့ ဟာ ရှိတာပေါ့ မွို့ထဲ သူဠေးမိနျ မတှေ သဘောင်ျသား မိနျးမတှေ က အဲ့လိုလာတာတဲ့ ကဲပွောမငျးအဲ့အလုပျလုပျမလားတဲ့ ကနြျောလဲ စဉျးစားရတာပေါ့ ငှရေတဲ့ အလုပျဆိုတော့ ကနြျောလဲ လုပျခွငျတယျ သို့ပမေဲ့ အိမျကမိနျးမကိုတော့ အားနာတယျ သူအပျေါသစ်စာပကျြရာ တော့ ဖွဈတယျ ဒါပမေဲ့ကှာ သူအဆငျပွပွေေ ထားနိုငျဖို့က ငါ့အတှကျအရေ ကွီးတယျလေ ဒါဆို အကို သူက ၃သောငျး ၄သောငျးက ပုံသရေတာ လာလို့ ငှကေဆိုတော့ ဒါတော့ ညီရယျ မငျးကို ကွိုကျတဲ့ မိနျးမမြားရငျ ၄သောငျးမကဘူး ၇သောငျး၈သောငျးထိ ရနိုငျတယျ တဲ့ အကှော အကို ဒါဆို ကနြျောလုပျမယျ လို့ မိနျးမကိုတော့ ဘယျလိုပွောပွရမလဲ မသိဘူလို့ ဟာ ညရေယျ လိမျရမှာပေါ့တဲ့ အတူတူ ငှအေဆငျပွဖေို့ လုပျတာပဲဟာတဲ့ အကှောလို့ ကနြေိာလဲ တှဝေေးနတေယျ ဒါနဲ့ ညေ မရှကျနဲ့ တာဝနျအရ မေးရတာပါတဲ့ ညကေ လိငျတံ ဘယျလောကျကွီးလဲ ရှညျတာတှေ အကိုပွောပွ အကို ပိုငျရှငျကိုပွောပွမယျ
သူကွိုကျမှ အလုပျထဲ ပေးလုပျခိုငျတာတဲ့ လိုးရော လိုးနိုငျလားတဲ့ ရပါတယျ အကိုလို့ ကနြျောလီး အရှညိတော့ တဈထှာကြျော တယျ ၆လကျ၃ .၄.လောကျရှိတယျလို့ အအေဒေါဆို မဆိုးဘူးတဲ့ ကဲဒါဆို မနကျဖနျ အကွောငျးပွနျမယျတဲ့ အလုပျရပွီ လို သတျမှတျလိုကျတော့တဲ့ ညီလေး လိုးအပျရငျ မငျးမှုတျပေးတာတှေ ရော မှုတျတတျတယျ မလားတဲ့ ဒါကတော့ လုပျခိုငျခဲပါတယျတဲ့ ငှပေိုတောငျးလို့ရတယျတဲ့ ဒါက မငျးမလုပျခွငျလဲ ရတယျတဲ့ အပေါလို့ ကနြျောလဲ အိမျပွနျပွီ မိနျးမအလုပျကို သှားကွိုပါတော့ တယျ မိနျးမအပျေါ သစ်စာဖောကျစလို ဖွဈပမေဲ့ ကနြျော ညာ ထားရမှာပဲ ကနြျောနဲ့ ကနြျောမိနျးမ အဆငျပွဖေို့ စာဝတျနရေေ အဆငျပွကေ အဓိကပါ မိနျးက အလုပျဆငျလို့ ကနြျောကို မွငျတော့ ပွပွေီ ကနြျောဆီ ပွလောပွီ ကနြျောလကျကလေးကို တှဲလိုကျ တယျ အကို စောငျ့ရတာ ကွာပွီလာ ဟိုမေး ဒီမေးနဲ့ ကနြျောတော့ ကိုယျလုပျမဲ့အလုပျကွီး ကွောငျ့နောငျတ ရမယျဆိုတာ သိပမေဲ့ လဲ ငါ့မိနျမပငျပနျနတော မကွညျ့ရဲ့ဘူးကှာ ပွီရငျ မိနျးမက ခမျြးခမျြးသာ သာ နလောတဲ့ သူဆိုပမေဲ့ အခုလဲ ကွညျ့လေ သူအလုပျမ ရှေးပဲ မိနျးမကောငျးပီသစှာ သူပါအလုပျ လုပျတယျ ကနြျောလဲ အလုပျရကွောငျ့တော့ ပွောရမယျ ဘာအလုပျလို့ ပွောရမလဲ ဆိုတာ မသိဘူး နောကျတော့ ကနြျော စိတျကူပေါကျပွီး မိနျးမ မိနျးမ အကို နောကျရကျတှေ ဆို အလုပျကောငျးရပွီ လို့ ဟာ ဘာလုပျ လဲ အကိုတဲ့ ငါ သီရိမင်ျဂလာဈေးမှာ ကုနျတငျ ကုနျခြ စရငျမှတျပေးရမှာလို့ ပွီရငျ
တဈညကို ၃သောငျ လောကျရမယျတဲ့ ဟငျညဘကျ လုပျရမဲ့ အလုပျလာတဲ့ ဟုတျတယျလေ ခဈြရဲ့ သီရိမင်ျဂလာဈေး ကုနျတှကေ ညဘကျမှ ဝငျတာလေးလို့ ဒါပမေဲ့ အကိုတို့ ငှစေုမိရငျ အကို အလုပျထှကျမှာပါလို့ အငျပါ ရပါတယိ အကိုရယျ အဆငျပွသေလို လုပျကွတာပေါ့တဲ့ ငါတော့ စိတျထဲ မကောငျးဘူး ဒါပမေဲ့ မလှဲစာဘူးလေ…ငါလဲ ငါ့အိမျထောငျရအေတှကျပဲ အဲ့ည မိနျးမကလဲ ညဘကျအလုပျ လုပျရမယျဆိူတော့ သိပျတော့ လကျမခံခွငျ ပမေဲ့ ငါတို့ရဲ့နောငျရေ လဲ ရှိသတေော့ သူလဲ မတားနိုငျဘူ မိနျးမရယျ အကို အဆငျပွရေငျ မိနျးမအလုပျမလုပျနဲ့တော့ အိမျမှာပဲနလေို့ အဲ့ည ကနြျောစိတျထဲ မိနျးမကို ပဈထားပွီ တခွာ မိနျးမတှေ လိုးရတော့မယျ ဆိုတော့ မိနျးမကို သနာမိတယျ အားလဲ နာတယျ အဲ့ည မိနျးမကို ကနြျော ဖကျအိပျတယျ ပွီရငျ မိနျးမကို သုံးခြီးလေးခြီးလောကျ လိုးပဈတယျ မိနျးမက အရညျထှကျတာ နညျလာတော့ မိနျးမစိတျပါအောငျ ကနြျော မိနျးမကို ပေါငျကို ကားပွီ ကနြျော အဖုတျလေးတှကေို ပတျပွီး လြားလနေဲ့ လကျြပေးတာ အား….ကို ရေ ငရဲကွီးမယျ မကွီးပါဘူးခဈြရယျ အကို ခဈြကို မှုတျပခွေငိလို့ပါ ဆို ပွီ ပွှတျ….ပွှတျ….ပွှတျ… အား ကိုရေ အား… အငျး….အငျ……ကိုရေ အား ..ကိုရေ တျောပွီ…..ခဈြမနတေတျဘူကှား အာ….အငျ….ပွှတျ….ပွှတျ….ကနြျော မိနျးမကို စုပျထုပျတာ ပွှတျ…ပွှတျ…အား အားကိုရေ ခဈြလဲ အကိုကို မှုတျပခွေငျတယျ ….. အငျမှုတျလေးလို့ သူက ကနြောအောကျကို ဆငျပွီ ကနြျောလီးကွီးကို ကိုငျပွီ ပွှတျးးပွှတျး ပွှတျ
အားးးးးမိနျးမရယျ ကောငျးလိုကျတာ ခြိုလာလို့ အကိုလကျြကွညျ့လေးတဲ့ သူက ကနြျောကွီး ကို စုပျနတော ပွှတျ ပွှတျနဲ့ သကွားလုံး စုပျသလို စုပျနတော ပွှတျ ပွှတျ နဲ့ ငါလဲ ခဈြ ကိုကိုခှလိုကျလို့ မိနျးမက ကနြျောကို မှုတျပေ ကနြျောက မိနျးကိူ ဇောကျထိူးထား ပွီ အောကျကနေ မှုတျပေး ပွှတျးးပွှတျ ပွှတျ အား အားကိုရေ ကောငျးတယျ ကှား မောငျရယျ အား အား အငျးအငျး မောငျရေ ခဈြထှကျတော့မယျထညျ့တော့မယျတဲ့ ထညျ့ခွငျသဘေူး ခဈြဟာလေးကို မှုတျခွငျသတေယျလို့ ဟာ.. ထှကျတော့မှာကိုတဲ့ ကိုကိုပျေါမှာ မထုပျခွငျဘူး တဲ့ အရညျတှနေဲ့ ညဈပတျကုနျမယျတဲ့ ညဈပတျ ညဈပတျ ဒီတိုငျထုပျခြ ကိုကို မှုတိပမေယျလို့ ပွှတျးးးပွှတျးးးပွှတျးးးအား ကိုရေ ကိုရေ အား ခဈြတအားကို ထှကျခွငျနပွေီ ကိုကိုရယျ ထညျ့တော့မယျ မရ ဘူး ကိုကိုပါစပျပျေါ မထုပျတတျဘူး ခဈြထညျ့ပဲထညျ့ခွငျတယျ
အား အား အား အားကိုရေ အား အား အား အငျး အငျး ကြှတျးးးးကြှတျး ကြှတျးး အား အား ထညျ့တော့ကှာဆို ပွီ ကုနျးထတယျ
ထညျ့တော့မယျတဲ့ ပွီတော့ ကားယာကွီးခှပွီ ကနြျောလီးကွီးကို ကိုငျပွီ ကနြျောမိနျးမက သူအဖုတျထဲ ကို ထညျ့ခလြိုကျပါတယျ ဗဈ.ဗဈဗွီးးးးး အား ကိုရေးးးးကောငိးလိုကျတာကှား အားအား အားကိုရေ အရမျးထှပျခွငျနတော သိလားးး အငျပါ ထုပျ အားရပါ လုပျနျောခဈြ ကိုကော့ပေးထားမယျ အား အား ကိုရေ ကောငျးတယျကှား အား အား ကိုရေ ခဈြ ကိုကိုလီးကွီးကိုကွိုကျလား ရငျးးးအငျးကွိုကျတယျ ကိုကို ဘယျသူနဲ့မှမဖောကျပွနျရဘူး ကိုကိုလီးကွီကို ခဈြက ပိုငျတယျ ခဈြဟာကို ကိုကိုပိုငျတယျ သိလားးး အငျးပါ ခဈြရယျ ကိူကို လီးကွီးက ခဈြအတှကျပဲ နျော အငျပွီရော အားအား အား အား ကိုရေ ကောငျးတယျကှာ အား အား ကိုကို ရေ အားးးးအငျးးး ကိုကိုရေ ခဈြက နာလို့ညာနတော အားအား အားအငျး ကိုရေ ကပျြနတောပဲကှား လီးက တငျးနတောပဲ အား အာ ကွိုကျလာခဈြ ရငျ ရငျ အငျကွိုကျတယျ အရမျးကွိုကျတယျးးယယ ကိုကိုကိုအရမျးခဈြတယျ သိလား အငျပါ ကိုလဲ ခဈြကို အရမျးခဈြတာ အားအား အငျးအငျး အားးအားကြှတျ ကြှတျ ကိုရေ ထိတယျ သိလား ခဈြ အထဲထိထိတယျ အားအား ကိုရေ အား အငျးးးအားအား ကြှတျကြှတျ ထှကျတော့မယျ ကှာ အား အကိုပွီတော့မလား အား အငျးးအားးးးးးးးးးးကိုရေးးးးးး ဆိုပွီ မိနျးမကလဲ ပွီးငါလဲ ပွီသှားပါတော့တယျ
အားအား အားကိုရယျ ခဈြ ပေါငျတှပေါကှနပွေီတဲ့ အငျလို့ ကို ခဈြတို့ဘယျတော့မှ ကိုယျဝနျရမလဲ မသိ ဘူးနျောတဲ့ ဟာရမှာပေါ့လို့ အခုတောငျ ခဈြဗိုကျထဲ မှာ ကလေးလေး သသေလေေး ရှိနလေောကျပွီလို့ ကိုကိုက ဘာလေးလိုခွငျလဲတဲ့ ယောကြာင်္းလေ လို့ အငျးအငျး ခဈြမှေးပမေယျတဲ့ ခဈြရောလို့ ခဈြက ဘာလေးပဲဖွဈဖွဈ ကိုနဲ့ရတဲ့ကလေး ခဈြတယျ တဲ့ ခဈြမွနျမွနျလိုခွငျနပွေီတဲ့ အငျပါ ကိုညတိုငျးလိုးပရေငိ ရမှာပေါ့လို့ တဈတိုးတိုးနဲ့ စကားပွောရငျ အိပျကွပါတော့တယျ ကနြျောလကျမောငျးလပေျေါမှာ အိပျပြျောနတေဲ့ ကနြျောမိနျးမကိုကွညျ့ပွီ ခဈြလိုကျတာကှာ သူအပျေါ စီပှာရေးကွောငျ့ သစ်စာဖောကျရမှာ မို့လား မသိ ပိုပွီ သူကိုခဈြ လာတယျ မိုးလငျတော့ သူကို အလုပျပို့ပပွေီ ကနြျော အလုပျထညျ့ပမေဲ့ အကို ဆီသှားတော့ အေးအညေီလလေား အဆငျပွလော တဲ့ ငါလဲ ဘာမှနျမသိဘူ ပွတေယျ လို့ ၁၀း၀၀မှ သှားမယျကှာတဲ့ ကနြျောတို့ ၁၀း၀၀ထှကျသှာကွကတြာပေါ့ ကနြျောကို ကားစီရငျ ၈မိုငျရောကျတော့ ဆငျမယျ ညီလတေဲ့ ၈မိုငျမှာဆငျပွီ အခု ၈မိုငျမော ရဲ့နောကျဘကျကတြယျ တိုကျတနျး ၄လှာပျေါ ချေါသှာတယျ ဟိုကတြော့ ရှတှေေ တှဲလှဲ တှေ ဝတျထားတဲ့ အသကျ၅၀နီပါ အဖှာကွီးကို ဟာ မောငျမွငျ့သိနျးလာလာတဲ့ ကနြျောကို ချေါလာ တဲ့ သူကို ပွောပါတယျ
ကနြျောကို သူလာတဲ့ အဟေုတျတယျ အနျတီတဲ့အေးအေး အဲ့လို အရှယျကောငျးလေးတှေ လိူခွငျတာတဲ့ နငျချေါလာရငျ အရကျသ မာ ပိနျညောငျရိုးကွီးပဲတဲ့ အလုပျအကိုငျမကောငျးဘူးတဲ့ သူရော အရကျသောကျလားတဲ့ မသောကျဘူးလို့ အေးကောငျးတယျ မောငျးလေးတဲ့ ဒီအလုပျက စှမျဆောငျကောငျးမှ ငှဝေငျတာတဲ့ အနျတီနဲ့ သားက စီပှာဖကျပဲတဲ့ ဒါတဲ့ ငါကိုချေါလာတဲ့ သူကို ဒီညပဲ သူကို အလုပျဆငျ ခိုငျမယျတဲ့ ရတယျ ရတယျ အနျတီ ဆိုပွီ ကနြျောကို ထားခဲ့ပါတော့တယျ မိနျးမကတော့ ဒီည အိမျဘေးနာကသူ သူငယျခငျြးဆီ သှားအိပျရမှာပါ အဲ့ခြိနျး ဖုနျးမကိုငျနိုငျတော့ မိနျးမကို အလှမျးပွေ တောငိ စကားမပွောရပါဘူး ဒါနဲ့ အနျတီကွီးက ကောငျးလေး မငျးနာမညျက ဘယျလိုချေါလဲ တဲ့ ဟုတျ အနျတီ ကနြျောနာမညျ အုပျစိုးပါခဗြာလို့ အေး မောငျအုပျစိုး မငျးဆီ မိနျးမ တဈယောကျလာရငျ အနျတီ ငှေ ၄သောငျးရတယျ အဲ့၎သောငျမှာ အနျတီက ၂သောငျး မငျးက၂သောငျး လို့ ပွီ ရငျ နငျအိပျရငျ သူတို့ ပွီရငျ နငျအရညျမထုပျပဈနဲ့ ထိမျးထား မပီမှမရမှထုပျ နငျနောကျဆကျတှဲ တှေ မလုပျနိုငျပဲ နမေယျ
သိလာတဲ့ ဟုတျပဲ့ပါလို့ ပွီရငျ မငျကို မှုတျတာတှေ ဘာတှခေိုငျးရငျ ငှတေောငျတဲ့ နငျးအောကျဆိုကျပဲတဲ့ သူတို့အမှုတျခံခွငျအောငျ လဲ မငျး သူတို့ကို မွူဆှယျပေါ့တဲ့ နငျတို့နဲ့ ဆကျဆံရမှာ သူဠေးမတှကွေီးပဲတဲ့ သူတို့ယောကြာင်္းက မလိူးအားလို့ နငျးဆီးလာမှာတဲ့ မှာစရာရှိတာတှေ မှာပွီ ဒီညတော့ မငျးဒီအဝတျနဲ့ပဲ ဝငျတဲ့ နောကျနေ့ အကြီ င်္ အဝတျစာ ကောငျကောငျး ဝယျတယျတဲ့ ဒါအလုပျ အတှကျပဲတဲ့ ဟုတျကဲ့ပါလို့ ကဲ ရောရောတဲ့ ကနြျောကို ဆေးခဲလေးတှေ အထုပျကလေးနဲ့ပေးပါတယျ အဲ့ဆေးက အိပျခါနီးသောကျ တဲ့ ပွီရငျ မငျးဟာ ထလာလိမျ့မယျ ကွာမယျတဲ့ သူဆန်ဒကို ဖွညျ့ဆီးပနေျောတဲ့ မငျးမှာ မိနျးမရှိလာတဲ့ ရှိတယျ အနျတီလို့ အေးအေး ဒါဆို မငျး အတှအေ့ကွုံရှိပွီ သာ တာဝနျကမြှောပါလို့ နောကျတော အနျတီက ဖုနျးလှမျးဆကျတယျ ဟေ့ သူငယျခငျြး အသဈရောကျ နတေယျ ကှတဲ့ မငျးနဲ့ အရငျတှပေ့ေးမလို့တဲ့ ခဏရပျပွီ ပုံမှနျးဈေးပါပဲတဲ့ ငါဆီးမှာ ဈေးပွောငျးတာ မရှိပါဘူးတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ ရး၀၀ထိုး တော့ အမကွီး ၃၀ကြျောတော့ ရှိမယျ ရောကျလာတယျ
အမလေေး မထငျရဲ့စရာကှား ခြောလိုကျတာ လယောဉျမယျ ကနြတောပဲ သူက ဒါမြိုလုပျတာ တကယျကို အံဩစရာပဲကှာ အရပျ ဒေါငျကလဲ ကောငျးနဲ့ အနျတီက ကနြျောကို သူပဲတဲ့ ကနြျောကို တခကျြ ကွညျ့ပွီ ငှေ ရှငျးဖို့ လုပျပါတယျ ပွီတော့ အနျတီက အဆငျ့ မွငိ့လာပွီပဲ ခြောခြောလေးတှေ ရှိတာ ဖှကျထားတာလာတဲ့ ဟယျမဟုတျပါဘူးဟယျ ဒီနမှေ့ရောကျလာတာ အမလဲ သူကိုနငျတို့ အကွိုကျမို့လို့ ခကျြခငျြချေါထားတာတဲ့ ကနြျောကိုကွညျ့ပွီ ဒီမှာမငျးမမ အဆငျပွအေောငျး လုပျနျောတဲ့ မငျးမိနျးမ လို့ စိတျထဲတှေး လုပျတဲ့ ကနြျောလဲ ပွုံပွတယျ ဟိုအမကွီကတော့ အမကလဲ တဲ့ ကဲကဲ မောငျးလေ အခနျးထဲ သှားနှငျ့တဲ့ အနျတီကွီးက ပွောတော့ ကနြျော အခနျးထဲ ဝငျပွီ ထိုငျခုံမှာ ထိုငျးနပေါတယျ ဆေးလဲ သောကျပွီပွီ အာနိသငျတော့ ပျေါမလာသဘေူး နောကျတခါးက ကြှီးးးးး ဆိုပွီ မမကွီးရောကျလာပါတယျ မမလာ လို့ တခှနျးတော့ ပွောလိုကျတယျ သူက တခါးကို ဂြိမျးးးးဆိုပွီ ဂလြကျခတျလိုကျတယျ ပွီ တော့ သူဝတျလာတာက အကြီ င်ျအမဲ ဇာအကျြီ ကနြျောကို ကွညျ့ပွီ မောငျလေးက အိမျထောငျရှိလာတဲ့ ရှိတယျအမလို့ အိမျထောငျ ကွတာ မကွာသဘေူး လပိုငျပဲရှိသတောလို့ အျောတဲ့ နငျမိနျးမသိလာတဲ့ သိဘူးအမလို့ ညာထားရတာပေါ့တဲ့ ဟုတျအမလို့ ပွီ တော့ မမက သူဆံပငျတှေ ဖြီခလြိုကျပါတယျ
ပွီတော့ ကုတငျပျေါမှာ ထိုငျပွီး သူကယျြသီတှေ ဖွုတျနပေါတယျ လာလေးမောငျးလတေဲ့ အငျးလို့ဆိုပွီ သူဘေးမှာ ထိုငျးလိုကျပါတယျ သူက ကနြျောပေါငျကို သူပေါငျနဲ့ လာမှီပါတယျ ဒီနရောမှာ အမတခါလာဘူတယျတဲ့ ဒါပမေဲ့ ဘရမျးဘတာတှတေဲ့ အမဖီကိုမ လာဘူးတဲ့ မောငျလကေတြော့ သနျ့တယျနျောတဲ့ ကြောငျးပွီပွီလာတဲ့ မပွီဘူးအမ ကနြျော ၁၀တနျးကလြို့ အလုပျလာလုပျတာလို့ ရနျကုနျမှာ မိနျးမရသှာတော့ ကွုံရာကပြနျ အလုပျလုပျနရေတာ လို့…ဩျောဆိုပွီ မောငျလေ အဖျောဆောငျတာ ကွိုကျလာတဲ့ ဗြာ….ဟငျ ကှနျဒုံလလေို့ အျောမကွိုကျဘူလို့ ဒါပမေဲ့ အမရဲ့ဆောငိထားတော့ အမဗိုကျမပွီးဘူးပေါ့လို့ အမက မကွိုကျဘူတဲ့ ရိုးရိုး လုပျရတာ သဘောကတြယျတဲ့ အငျပါသဘောလို့ အဲ့ခြိနျ ကနြျောကလဲ ဆေးသောကျထာတာ နာရီဝကျဖွဈလာတော့ လီးကွီး ကတောငျ နပွေီ မမက မောငျလေး အမကို နမျးလို့ရတယျ နို့တှေ ကိုငျ နျောတဲ့ ဟုတျမမဆိုပွီ ကနြျော သူအကြီ င်္ တှေ ခြှတျပေးနေ ပါတယျ ကနြျောလီးကလဲ တောငျးနတော မမက မောငျလကေ သနျ့သနျ့လေးနျောတဲ့ ကနြျောကို ထမိနျးတှေ ပါခြှတျပေးပါတယျ အတှငျခံအနီးလေး တိုငျးနနေတော ကနြျောလဲ မမရဲ့နို့သီးလေးတှေ ကို စုပျတာပေါ့ ပွှတျးးးပွှတျးးးပွှတျးးးအား မောငျလေး ခဈြ တယျကှာ သိလား အငျမမ အငျ အငျး အငျး ကနြျောဗိုကျတှပေါ နမျးတော့ မမက မောငျလေ မမကို မှုတိတာတှေ လုပျပမေလာ အမ မုနျ့ဖိုပေးမှာပေါ့တဲ့ ရတယျလေး အမလို ကနြျောက မမကို ဗိုကျတှေ နမျးရငျ ပေါငျခှ တှပေါနမျးတော့ အားမောငျရယျ စိတျအရမျးစှပျ တတျတာပဲ
အာ မောငျလေး အား အား မောငျလေ အမဘောငျဘီး ခြှတျလိုကျပါလား တဲ့ သူအတှငျးခံလေးက အနီရောငျ အပါးလေ စပနျ့သား လေး ဒီဘကျခါး ဟိုဘကျခါး ကွိုလေးတှနေဲ့ တနျးဘိုးကွီး အတှငျခံမှာသိသာတယျ မှနေတောပဲ သူဠေးမတှရေဲ့ စောကျပမြား ကြ နျော အတှငျခံ အပျေါကနေ လြားနဲ့ လကျြလိုကျကနြျောတတှေးနဲ့ သူအတှငျခံ လေ စိူနအေောငျ လုပျ တော့ မမကွီးရဲ့ အဖုတျ နှုတျခမျးသားတှကေ အတိုငျသာ ဖောငျးနတော တှနေ့ရောပါတယျ ကနြျောလဲ နှုတျခမျးသားတှကေို အတှငျဘောငျဘီးအပျေါကနေ ငုံ ငုံပွီ ဆှဲ တာ အားးးအားးအား မောငျးလေ ခြှတျလိုကျပါလာ ဘောငျဘီ အားအား အငျးအငျး မောငျလကေောငျးတယျ ကှား အား အား အား နဲ့ ကနြျောကို သူ အတှငျခံ ကွိုတှေ ခေါကျခြိုးလေ ခညျြထားတာကို ဖွညျလိုပျပါတယျ ကနြျောလဲ အသားလေး အတှငျးခံ နီးနီးလကေို ဆှဲခှာလိုကျတော့ ကနြျော တတှေးတှနေဲ့ မမကွီးရဲ့ အဖုတျကွီး စိုးရှဲပွီ အဖွူရညျတှေ ကို မွငျနရေပါတယျကနြျောလဲ သူဘောငျဘီးနဲ့ အတှငျးထိ နှိုကျစုပျလိုကျတာ အားးးမောငျ နားတယျ ဆိုတော့မှာ ပွှတျးးးပွှတျးးးပွှတျးးးပွှတျူးး အားမောငျရယျ မှုတျတတျလိုကျတာကှား အားအား ကြှတျးးးကြှတျးးးအား အငျး အငျး မောငျးလရေေ အရမျးကောငျးတာပဲးးးးမှုတျတာ တျောတယျ ကှား အားးးးအား အားးးအား အာအမေရေးးးအားအားအငျး အငျးကြှတျးးးခြူး ခြူးးးအား အသကျရှုသံတှလေဲ ပွငျနတော အား အား မောငျရယျ လြာလနေဲ့ ကလျောနတော အမ အရမျးခံစားရတယျကှား
အား အငျးးးအငျးးးအားးးးးး အားအား အားကောငျးလိုကျတာကှားအားးးး ကနြျောလဲ လီးတောငျနတော မောကျနတော ဆိူဖာ မို့ပေါ့ ကမျြခငျးဆို ကနြျောလီးကွိုးပွီ ဘယျဆေးက အတျောမိုကျတာပဲ တောငျတာ လုံးဝပြော့မသှားဘူး အားမောငျရယျ ကောငျးတယျ ကှား မှုတျတာ သိပျတျောတာပဲ အားအား အားအား မောငျရယျ အမယောကြာင်္းတောငျ အဲ့လောကျကောငျအောငျ မလုပျပေးဘူးဘူး အားအား မငျးအရမျးကောငျးတယျကှား အား အငျး မောငျလေးရယျ အမဒီတိုငျးထုပျလိုကျမယျ ရလား အမမုနျ့ဖိုမြားမြားပမေယျ ပွီမှ လိုးပလေေးတဲ့ အငျရတယျ အမထုပျလိူကျလေးလို့ မငျးရောလိုးခွငျနပွေီလာတဲ့ အငျးလို့ ဒါပမေဲ့ အမဒီတိုငျထုပျအုံးလေးလို့ အငျ ပါဆို ပွီ ပွှတျးးးပွှတျးးးပွှတျးးးအားအား မောငျလေ စောကျစိကို မစုပျနဲ့ အမအရမျကငျြတယျ အား အား အေးအေး အဲ့နှုခမျးတှေ လြားနဲ့ အထဲထိ စုပျတာ လကျြတာက ထိတယျ မောငျရဲ့အငျးးကောငျးလိုကျတာ အငျးးးးမောငျလရေယျ အမွဲသာ အခုလိုခံရရငျ ကောငျမှာပဲကှာ အား မောငျလရေယျ
အားအား ဆို အာအားူးးပွှတျးးးပွှတျးးးပွှတျးးးအားးးးးးအားးးးးအားးမောငျရေ ထှကျပွီးးးးကှားးးးးအဈးးးးအဈးးး အားးးးခြူးးးးးး အားအား မောရယျ ဆိုပွီ ကနြျောခေါငျကို ကိုငျပွီ သူစောကျဖုတျကွီကို ခှာခလြိုကျ ပွနျကပျလိုကျ လုပျနတော မမကွီ အားအား မောငျရယျ အရမျးမှုတျတတိတာပဲ အား အား ပါစပျထဲ ဝငျသှားသလေားတဲ့ အငိးလို့ တကယျတဲ့ ဟုတျတယျလို့ အားအား အားကောငျးခကျြကှာ အမမနေို့ငျပါ့မလာကှာတဲ့ ပွီတော့မှ သူကကုနျထပွီ မငျးရော လီးတောငျနပွေီလာတဲ့ အငျးလို့ ပွတဲ့ ကြ နျောလဲ ပုဆိုလှနျပွတော့ အိုးးးနညျတာကွီးမဟုတျဘူး ရော… ကနြျောလီကွီးကို လကျကလေးနဲ့ သ ‘နတေယျ အိုးးးမောငျလေ ရယျ ကွီးလှကွီးလာရေ ဟုတျအမ တောငျနတောလဲ တငျးနတောပဲ အကြောတှကွေညျ့စမျး ထနတော အထသျတှေ ဖွဈနတော ဟာမောငျလေး လီးထဈမပွုတျသဘေူလာတဲ့ ဖွဲခတြယျ ပွးးးး အျောပွုတျနပွေီဟ လီးထဈမပွုတျသတေဲ့ ပုံကွီးနျောတဲ့ ဟုတျ အမ ကနြျောက လီးအထဈကွီတာလို့ ကွညျ့ပါလာ အရငျက သေးပွီ ထိပျကွီးက ကွီးနတော လို့ အေးဟုတျတယျနျော မငျးလီးက တမြိုးပဲတဲ့ အသဲယားစရာကွီးတဲ့အားမောငျလေ ဖွညျဖွညျတော့ လိုးနျော အမ ကှဲထှကျကုနျမှာစိုးလို့ ခံခွငျတော့ ခံခွငျနပေမေဲံ မငျးက အားကောငျးမဲ ပုံပဲတဲ့ ဟုတျဆိုပွီ ကနြျောသူကို နှုတျခမျးတှေ စုပျပွှတျးးးပွှတျးးး ပွှတျးးးးကနြျောလီးကွီးနဲ့ ပှတျပနေတောသူ ကို အားမောငျရယျ အမယားလိုကျတာကှာ အား ထညျ့ပါတော့ လာ မောငျရယျ အား အား မောငျးရယျ
အားထညျ့လိုကျတော့နျော မောငျ အား ယားနပွေီ အငျပါ ဆိုပွီ ဗွီးးးးးးအားးးးးးးးးးးမောငျ ဖောငျးးးဖောငျးးးးးဖောငျးးးးအားးးးအငျ ကြှတျ နာတယျ ကှာကှား အား အား အားးးးးး အငျးးးးအားးးးးမောငျရယျ မငျးလီးထဈကွီးက အမ အတှငျသားတှေ ကို အကုနျကို ထိ တယျကှားးးး နရောလှတျကို မထားခဲ့ဘူး အားးးအားးးးးး ကွိုကျတယျ ကှား လိုးတာလဲ ကွိုကျလိုကျတာကှားးး အားးးးကောငျးလိုကျ တာကှားးးးးးအားမောငျးးးရယျအားးးးးးအားးးမောငျရယျးးးး လိုးတတျလိုကျတာကှားးးးးး ကလအေဖကွေီးကွနတောပဲးအားးးအငျးးးးအပိုအလိုမရှိအောငျ လိုးတတျတယျ ကှားးးးးအား ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ အငျးးမောငျ ထိတယျ ကှာ အမအရ ကနြေပျတ ယျကှား အား အား မောငျရော လိုးရတာ ကွိုကျလား အငျ မမ မမစောကျပတျက လိုးလို့ကောငျးလိုကျတာကှာ ခြှဲပွီ ကနြတော အား အား အရညျတှေ ထှကျနတောအမြားကွီးပဲ မမ အငျဟုတျတယျ မောငျလေ အမက တောကျခွောကျ ထှကျနတော မောငျကိုခဈြမိပီ ကှားးး အားးအားးးမောငျရယျ ကောငျးလိုကျတာ ကှား အမ့ပွီပွနျတှောမယျကှား အား အား မောငျရယျ ထှပျတော့မယျ ထငျးတယျ အရမျးကို အထဲမှယားနပွေီ သိလား မောငျ ရော အငျး အတူ တူ ထုပျမယျ အား အားးးး အားးးမောငျးးးးရေးးးးးအားးးး မောငျးအာ မောငျ အားးမောငျးးး အားးးမောငျ ကွိုကျတယျ ကှာ
အာရပါရလိုးနျော မောငျ အား အားအမကော့ပထေားတယျ အားးးးးးအားးးးးးမောငျရေးးးးးးးး မမကွီးထှကျခါနီ အျောတာ တခနျး လုံးဟိနျးထှကျနတောပဲ ကိုယျတောငျရှကျတယျ မရဘူး မောငျးရေ ကောငျတယျကှား မောငျးရေ အားးးးအားးးမောငျးးးရေ အမပွီပီ ကှားးးးးးအားမောငျရယျ အားးးးကောငျလိုကျတားးးးကှားးးးး ခဈြ တယျ ခဈြတယျ ခဈြတယျ မောငျရယျးးး အားးးလိူးတာအရမျွိး ကုကျတယျ ကှားးးးးး အားးးးးအတူု တူးးပွီတာ ကောငျးတယျ ကှား လိူးတာကွိုကျတယျ အားးးးအားးးးးးး ဆိုပွီ ကနြျောလဲ ပွီ သူလဲ ပွီ ကနြျောနဲ့ သူ တဈယောကျနဲ့ တယောကျ ထပျပွီ ကနြျောလီးကွီ မမကွီစောကျဖုတျထဲ စိမျထာတာ အားအားးးး ကောငျးတယျ ကှားးးးးး မောငျလီးက တောငျနတေုနျူကှာတဲ့ လီးကွီ ထညျ့ပွီ အိပျပဈခွငျတာတဲ့ ပွီတော့မှ ကနြျော ကနြျောဖွောငျးးးးးဆိုပွီ ဆှဲနှုတျ လိုကျတာ အားးးးဖွညျဖွညျ နားတယျ မောငျ့ရဲ့ သူလဲ အတှငျခံ ဝတျတော့ဘူတဲ့ ပိုကျဆံအိပျထဲ ထညျ့ပွီ ကနြျောကို ရောမောငျလေ မုနျ့ဖို့ဆိုပွီ ငှေ ၈၀၀၀ပေးပါတယျ အမအခြိနျနရလို့ အခြိနျရရငျ မောငျဆီလာအုံမယျတဲ့ သူအဝတျတှေ ဝတျပွီ ကနြျောကို ဖကျပွီ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ဆိုပွီ နမျးလိုကျတယျ အရမျးခဈြတာပဲ သိလာ မငိးကိုတဲ့ ကနြျောနဲ့ သူအခနျးထဲ ထှကျပွီး ကောငျးမလေ မငျးအသံ အပွငျကပါကွားရတယျတဲ့ ချချ ဆိုပွီ ပွနျတော့မယျ အမ ညမ လဲ အားဘူတဲ့ အေးအေး နောကျလဲ အားပအေုံးနျောတဲ့ အခု အဆငျပွတေယျ မလားတဲ့ ပွတေယျအမ တဲ့ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျနဲ့ တောကျ တောကျ ဆငျးသှားပါတော့ တယျ ကောငျးလိုကျတဲ့ မမကွီ အဖုတျ အခုတော့ သူမဟုတျသလို လှညိ့တောငျမကွညျ့တာ ဝမျနညျးတယျ
ငါလဲ ကွားဆေးသောကျတယျတာ ပွောတယျ သူညညျသံက မထိနျနိုငျဘူး တခြိတော့ ထှကျသှားတာပဲ ပွီတော့ အနျးတီ က ကောငျး လေး သှားဆေး ရော့၂သောငျးတဲ့ ကနြျောတဈယောကျလိုးရသတေယျ ၂၈၀၀၀ရပွီ ပြျောလိုကျတာ ကဲကဲမွနျမွနျသှား လူမရှိဘူး အလုပျဆငျတာ တဈယောကျပဲလာတယျ ငှရေမဲ့အလုပျမလုပျခွငျကဘြူး အဲ့ကောငျတှေ နောကျနလေ့ာကွညျ့ ငါနှငျလှတျမှာတဲ့ အျောနလေေးရဲ့ အနျတီ မမကွီးက မငျးတို့နှစိယောကျနဲ့ပဲအလုပျလုပျမယျတဲ့ ငါ့အလုပျဖျောလဲမတှဘေူ့းသဘေူး ကဲသှားသှား တဈ ယောကျစောငျ့နတေယျ သူအဖျောက ပွီတော့မယျ နငျလုပျတာကွာတယျ သူတို့က တဈခြီပဲ လုပျတာ အကွာကွီမလုပျနဲ့ လီးကိုစိမျ စိမျမထားနဲ့ တဲ့ အျောတယျ ငါပါကနြျော ရဆေေးပွီ ထှကျလာတော့ အခနျးထဲ လှမျးအျောတယျ သနျ့ရှငျရေ ကောငျမလေးကို သနျ့ ရှငျရေ ပွီပွီလာ လူဝငျမယျ တဲ့ကောငျမလေ ထှကျလာတယျ ppအနျတီတဲ့ ကဲ အမ ဝငျတော့တဲ့ စောငျ့ရတာ အားနာတယျတဲ့ အဲ့ ကောငျလေ လူသဈတဲ့ အဖှာကွီကွညျတော့ အသကျက ၅၀ဖွဈနပွေီ
အခနျထဲရောကျတော့ ငါကလီးတောငိလို့သာ လိုးပတော ပေါငျတှလေဲ ပရတှေနျ့နတော အဖုတျကွီလဲ အမှမေရှိတှနျ့လိမျနတော ငါ လဲ မွနျမွနျပွီ ပွီရောဆိုပွီ စောငျတာဖောငျ ဖောငျ ဖောငျ ဖောငျ ဖောငျ အားးးအားး ကောငျးလေး ကောငျးတယျ ကှာ ကောငျလေး အား အားကောငျးလေး အား အား အား ကောငျလေ အားးးးးးအားး အောငျးးးကောငျးတယျကှားးးး အားလီးကွီးမြော့လီးကွီးပဲ အားးးးအနျတီးအရမျးကွိုကျတယျကှာ အားးးးအားးး အားးးကောငျးတယျ ဖောငျးးးးဖောသျးးးးးဖောငျးးးး အားအားးးးးးထှကျပွီကှား ပွီပွီ အားအားအားး ကောငျးလတေျော ပွီ တေိာပွီ အရမျးကွမျးတယျကှာ အနျတီနားတယျ အရမျးစောငျ့တာ မခံနိုငျဘူး အားအား နဲ့ လီးကွီကွညျ့ပွီ လူနဲ့မလိုကျဘူ လီးက ဒီအရှယျကို အဲ့လို အတငျကွီး စောငျလိုးတာ သပွေီပေါ့ ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျနဲ့ ထမိ နျကွီ ကိုငျပွီ ထှကျလာတယျ အနျတီကလဲ ဘာဖွဈလဲ မေးတော့ နငျးကောငျးမေးကွညျ့တဲ့ သူလဲ စိတျတို့ပွီ ပွနျသှာ အမှာ ကွီ မငျး ဘာလုပျလိုကျလဲတဲ့ ဘာမှမလုပျဘူ စောငျ့စောငိ့လိုးတာ နားလို ညငျညငျသာမရှိဘူး ဘာဖွဈညာဖွဈတယျ ဆိူပွီ ထှကျလာတာလို့ သူ ပွီးလာတဲ့ အမှနျတော့ ကမြ ပွီးသှားခဲ့တာကွာပါပွီ။
“မင်္ဂလာပါ” ( ဒေါ် နီနီ ဒေါ်သင်းသင်း) ညီအမ နှစ်ရောက် ကျနော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅/ ၂၀၁၆လောက်က ရန်ကုန်က ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင် ကျခဲ့ပါတယ် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ အေးအတူ ပူအမျှ အရမ်းလဲ ချစ်ကြပါတယ် ပြီရင် နာလည်မှု့ လဲ ရှိကြပါတယ် ကျနော်ရဲ့ မိန်းမက အရမ်း ကျနော်ကို နာလည်ပေတယ် ချစ်လဲ ချစ်တယ် အားလဲ ကိုးတယ် ကျနော်မိန်းမက ချမ်းသာတဲ့ မိသာစုကပါ အမေ အဖေ မရှိတော့တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပါ သူဘဝအတွက် ကျနော်ဟာ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ပါပဲ ကျနော်နဲ့ တန်းတူ ဆိုသလို သူမှာ သူအမေရဲ့ အမတွေ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ် နီနီ နဲ့ ဒေါ်သင်းသင်းဆိုတဲ့ အသက် ၃၆နှစ် အရွယ် အပျိုကြီးတွေ ရှိပါတယ် လောကကြီးမှာ မိန်းမသား နှစ်ယောက်ထဲ ကြိုးစားရုံကန်နေကြတဲ့ မိန်းမတွေပါ ကျနော်နဲ့ ကျနော်မိန်းမ ကြိုက်နေတော့ ဒေါ် နီနီ နဲ့ ဒေါ်သင်းသင်းက သိတော့ သူတို့တူမကို ကျနော်နဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ဖို့ မဖြတ်ရင် မင်းပါ အိမ်ပေါ်ကဆင်းရမယ်မင်းအမေးက မသေခင် ငါတို့ နှစ်ယောက် ကို အပ်ထားခဲ့ ကြတာ ဆိုပြီ အမြဲ ပြောတယ် တဲ့ ဒါပေမဲ့ ကျနော် မိန်းမက သူတို့ ညီအမ နှစ်ယောက် နဲ့ ရှေ့ဘဝ က ရန်သူတွေ လား မသိ အမြဲ ရန်ဖြစ်နေကြသူတွေပါ
ဒေါ် နီနီက ငွေတွေ သိန်းပေါင် သောင်းချီပြီ စက်ရုံ ဖွင့်ခြင်တဲ့ လူတွေ ကုမ္မဏီ ဖွင့်ခြင်တဲ့ လူတွေကို ငွေတိုး ချီးစားတဲ့ သူပါ ငွေ အရမ်း အမြတ်ထွက်ပါတယ် ဒေါ်သင်းသင်းကတော့ စကော်ဈေး လေဟာပြင် ဈေးဘက်မှာ ရွှေ ဆိုင် ပလက်တီနမ် ဆိုင် အပိုင်ဖွင့် ထားတဲ့သူပါ ဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့ ညီအမ နှစ်ယောက်ကို စုံကန်ပြီ ကျနော်နဲ့ အတူနေဖို့ သူရဲ့ အဝတ်ထုပ်ကလေး ယူပြီ ထွက်လား တဲ့ နေ့က ကျနော်မိန်းမကို အိမ်ပြန်လွှတ်ရမလိုလို ကျနော်ကို ချစ်လွန်းတဲ့ မိန်းမမျိုး နောက်တခါ မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး လဲ ဝင်ဝင်လာတော့ ကျနော် တကယ် ဝေခွဲမရ ဖြစ်ရပါတယ်ပြီရင် ကျနော်မိန်းမကို အပျိုစင်ဘဝကို ကျနော် ရထားတာပါ ဘာမှ ငြင်းစရာမလိုဘူး ကျနော် မိန်းမတစ်ယောက် တော့ လုပ်ကြွေနိုင်တယ် ဆို ပြီ ကျနော် ရပ်ကွက် ရုံးမှာပဲ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်
ကျနော် တို့ လက်ထပ်ပြီတော့ နေစရာ က မရှိတော့ မင်္ဂလာဒုံဘက် အခန်းလေးတွေ ရှိတယ် မင်းတို့. နေနိုင်ရင်လာ ခဲ့ ၃၅၀၀၀ကျပ်ပဲ ရှိတယ် ဆိုတော့ ကဲ မထူးဘူး မိန်းမရေ အဲ့ဘက်သွားနေရမှာပဲ ဆိုပြီ သူငယ် ချင်းကလဲ အလုပ်လုပ်ရင် ခင်မင်တဲ့ သူငယ် ချင်း က ကျနော်ကို အခန်းလေး ရှာပေးထားပါတယ် ဟိုရောက်တော့ အဆောင်မဟုတ်ဘဲ အိမ်သေးသေးလေးတွေရှိတယ် ရေ မီ အစုံနဲ့ အဲ့အိမ်တော့ ၄၀၀၀၀ကျပ်ပေးရမယ်တဲ့ ကျနော်မိန်းမကလဲ ရတယ် အဲ့အိမ်လေးပဲယူမယ်တဲ့ ကျနော်မှာလဲ အိပ်ထဲ လုံးဝငွေမရှိပါ ဘူး လက်ထဲ ၃၅၀၀နဲ့ မိန်းမခိုးပြေတာ ငါတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ် သို့ပေမဲ့ မိန်းမကို သူအဒေါ်တွေ မုန့်ဖို ပေးတာတွေ စုထားတဲ့ ငွေ ၃သိန်းကျော် ပါတယ်တဲ့ ပြီရင် အမေအမွေ နကပ် တစုံ ပါတယ် တဲ့ ကဲ ဒါဆို ၃သိန်းနဲ့ ပစ္စည် ပစ္စရံတွေ ဝယ်ကြမယ် ဆိုပြီ မင်္ဂလာဒုံ ဈေးဘက်ကို ပစ္စည်းတွေ အိပ်ယာတွေ အိုးတွေ ခွက်တွေ လျောက်ဝယ်ကြပါတယ် ကျနော်မိန်းမဟာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ တကယ် သနာစရာလေးပါ ကျနော်ဟာလဲ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ ရှေ့ရေကို ကျနော်တော့ တွေးတောပြီ စိတ်က အလိုလိုကြောင်လာတယ် တာဝန်ယူစိတ်တွေ ကင်မဲ့လာတယ်
ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကို ယုံကြည့်လွန်းတဲ့ ကျနော့ဇနီးချော် မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရင် ယုံကြည်မှု့တွေ ရှိရှိလာတယ် သူပါလာတဲ့ ငွေလေး တွေလဲ တပတ် နှစ်ပတ် ဆိုတော့ တဖြည် တဖြည်နည်းနည်းလာပြီ ကျနော်လဲ အလုပ်ရှာ တာ အလုပ်မရသေပါဘူး ကျနော်မိန်းမ ရဲ့ အဒေါ်တွေကလဲ ဆက်သွယ်မလာ ခဲ့ပါဘူး ကျနော်မိန်းမလဲ မမျော်ပါဘူး သူ့ဘဝမှာ ကျနော်ဘေးမှာရှိနေရင်ပဲ သူကျေနပ်နေတဲ့ သူပါ ဘေးမှာရှိနေရုံမကဘူး ကျနော်ကို ပိုင်ဆိုင်နေရပြီ ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိနေရင်ပဲ ပျော်ရွှင်နေတတ်သူပါ ကျနော်တို့ တလပြည့်တော့ အဆောင်ခက ၄၀၀၀၀ပေးဖို့ နည်းလာပြီ သူမှာလဲ ငွေက ၅သောင်ကျော်ပဲ ရှိတော့တာ အဆောင်ခသာ ပေးလိုက်ရင် ကျနော်တို့ စားဝတ်နေရေ မပြေလယ်နိုင် ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ် သွားပြီ အလုပ်လေးဘာလေး များရှိနိုင်မလား မေးရင်ပေါ့ သူငယ်ချင်းကလဲ ငါ မှာ ကုမ္မဏီ အဆက်အသွယ် တော့ မရှိဘူး ပန်ရံ မြေတူး တွေပဲရှိတာတဲ့ ကျနော် ငြင်ခြင်ပေမဲ့ မိန်းမမျက်နှာ ကြည့်ပြီ ဩော် ငွေရ ရင် ပြီရော်ကွာ ဆိုပြီ လုပ်မယ်ကွာ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ ဆိုပြီ ကျနော် ငွေ ဘယ်လောက်ရမလဲ မေးတော့ ၃၀၀၀ ၃၅၀၀ပဲရမယ်တဲ့ အလုပ်ကြမ်းသမားက တဲ့ ကဲမထူဘူး လုပ်မယ်ဆို ပြီ
အေး အေး ဒါဆို မနက် ဝင်ခေါ်မယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက အေးအေးဝင်ခေါ်ကွာလို့ မိုးလင်းတော့ ကျနော်အလုပ် လိုက်သွားပါတယ် ကျနော် မြေတွေ တူးရတယ် တွင်းအနက်ကြီးတွေ တူးရတယ် ပင်ပန်တာနဲ့ ငွေရတာနဲ့ မကာမိပါဘူးကွာ အလုပ်သမာတစ်ယောက် ရဲ့ တရက်လုပ်ခ ၃၅၀၀ဆိုတာ နည်းလွန်းပါတယ်ကွာ ကျနော် အဆင်ပြေရင် ပြီရောကွာဆိုပြီ ရက်၂၀ ၃၀လောက် ကျိတ်မှိတ် လုပ် လိုက်တယ်စုမိဆောင်မိတာလေးနဲ့ ကျနော်တို့ အဆင်ပြေအောင် ပြန်လုပ်ဖို့ မိန်းမနဲ့ တိုင်ပင်ကြတာပေါ့ မိန်းမကလဲ ယောကျာင်္း ရယ် ပင်ပန်းရင်လဲ အလုပ်သစ်ရှာပါ မိန်းမလဲ စတိုးဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြောထားတယ် အိမ်ဘေးနားက အမကြီးက ပြောပေမယ် လို့ ပြောထားတယ်တဲ့ ကျနော်လဲ စာဝတ်နေရေ ခိုက်ခဲနေတဲ့ အချိန်မှာ မိန်းမကို တာခြင်ပေမဲ့ ကျနော်လက်ခံရပါတယ် သူ ကတော့ တနေကုန်၂၀၀၀လောက်ပဲ ငွေရပါတယ် ကျနော်လဲ ၃ရက် ၄ရက်လောက် နားပြီ အိမ်ရဲ့ အိမ်၅လုံးကျော်လောက်မှာ ကွမ်းယာဆိုင်လေး ရှိတော့ ကွမ်းသွားဝယ်စားရင်းနဲ့ ဇယ်ခုံလဲ ရှိတော့ ဇယ်တောက် နေတဲ့ အကိုကြီးတစ်ယောက်က သဘောကောင်းတယ် စကားတွေ ပြောတယ် ညီးလေတို့ပြောင်လာတာ အဆင်ပြေတယ် မလား ငါတို့ရပ်ကွက်က အေးချမ်းတယ် ဘာတယ် ညာတယ်နဲ့ စကားတွေ ပြောနေကျတာပေါ့ ပြီတော့ စီပွာရေ အကြောင်းမေးတာပေါ့
စီပွာရေး အကြောင်းမေးတော့ အကိုရယ် အဆင်မပြေပါဘူး အလုပ်ကလဲ ရှားတယ် ပြီရင် ရှိတဲ့ အလုပ်ကလဲ အရမ်း ပင်ပန်းလွန်းတော့ မခံနိုင်ဘူး မြေတူးရတာ လို့ ဒါနဲ့ အကိုကြီးက ဒါဆို အကို အလုပ်ပေးမယ် ညီလေ လုပ်မလားတဲ့ ဟာ အဆင်ပြေရင်တော့ လုပ်ခြင်တယ်လို့ ဒါဆို လာလာ အကို အိမ်သွားမယ် အလုပ်ကြောင် ဆွေနွေးရအောင်တဲ့ ကျနော်လဲ သူနောက်က လိုက်သွားတာပေါ့ ကဲ ညေအကိုတို့ အလုပ်က ပိုက်ဆံတော့ရတယ် ဒါပေမဲ့ ညေအဆင်ပြေပါ့မလားတဲ့ ပြေပါတယ် အကိုပြောပါ ဥပဒေနဲ့ လွတ်ကင်ရင် ကျနော် အကုန်လုပ်တယ် လို့ အေပါအေပါတဲ့ ဒီမှာညီလေ အကိုတို့အလုပ်က ညဘက်အလုပ်ဆင်း ရမယ် တစ်ညကို ၃သောင်း ၄သောင်းလောက်ရတယ်တဲ့ ဟာ ဘာအလုပ်လဲ လုပ်မယ် လုပ်မယ် အကိုလို့ ကူညီးပေပါလို့ အေကွာ မင်းမှာ မိန်းမရှိတော့ အဆင်ပြေပါ့မလားတဲ့ ပြေပါတယ်လို့ ကျနော်အလုပ်လုပ်တာ သူအတွက်ပဲ ဟာလို့ အေကွာ ဒါဆို မင်းကို အကိုပြောမယ် မင်းဂျေဂလိုးဆိူတာ ကြားဘူးလားတဲ့ ဟအေ ဘာလဲ အကိုလို့ အဲ့အလုပ်က မင်းရုပ်ရည် မင်းခန္ဒာ အချိုးအသားနဲ့ ဆို အဆင်ပြေတယ် တဲ့ ဟုတ် အကို ဂျေဂလိုး အလုပ်က ဘာလဲ ဥပဒေနဲ့ လွတ်ကင်လာ ဘယ်လိုလဲ ကျနော်လဲ သေရှာမေးတာပေါ့ သူက ညီလေး တိုးတိုးပြော အဲ့အလုပ်က ဥပဒေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့
အင်း အင်း ဒါဆို ပြောလို့ အကို အေးပါ အေးပါ ဆိုပြီ အမှန်တော့ ဂျေဂလိုးဆိုတာ ဖာသည်တွေလို့ လာတဲ့ဧည် သည်ကို မင်းအတူတူ အိပ်ပေးရမှာတဲ့ ဟာ အကို ဖာခေါင်းလာလို့ ဟာမဟုတ်ဘူး ဖာခေါင်းဆိုတာ ကောင်မတွေကို လိုးမဲ့လူ ရှာပေ ရတဲ့ လူကို ခေါ်တာတဲ့ အခုက မိန်းမတွေက သူတို့ ယောကျာင်္းနဲ့ ဝေးနေလို့ ယားလို့ ခံခြင်လို့ အခကျေးပေပြီ လာခံတဲ့ မိန်းမတွေကို နင်အတူတူအိပ်ပေးရမှာတဲ့ ဒါကို ဂျေဂလိုးလို့ခေါ်တာတဲ့ ဟာအကို အဲ့လို မိန်းမမျိုးရှိလို့လာလို့ ဟာ ရှိတာပေါ့ မြို့ထဲ သူဠေးမိန် မတွေ သဘောင်္သား မိန်းမတွေ က အဲ့လိုလာတာတဲ့ ကဲပြောမင်းအဲ့အလုပ်လုပ်မလားတဲ့ ကျနော်လဲ စဉ်းစားရတာပေါ့ ငွေရတဲ့ အလုပ်ဆိုတော့ ကျနော်လဲ လုပ်ခြင်တယ် သို့ပေမဲ့ အိမ်ကမိန်းမကိုတော့ အားနာတယ် သူအပေါ်သစ္စာပျက်ရာ တော့ ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ကွာ သူအဆင်ပြေပြေ ထားနိုင်ဖို့က ငါ့အတွက်အရေ ကြီးတယ်လေ ဒါဆို အကို သူက ၃သောင်း ၄သောင်းက ပုံသေရတာ လာလို့ ငွေကဆိုတော့ ဒါတော့ ညီရယ် မင်းကို ကြိုက်တဲ့ မိန်းမများရင် ၄သောင်းမကဘူး ၇သောင်း၈သောင်းထိ ရနိုင်တယ် တဲ့ အေကွာ အကို ဒါဆို ကျနော်လုပ်မယ် လို့ မိန်းမကိုတော့ ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ မသိဘူလို့ ဟာ ညေရယ် လိမ်ရမှာပေါ့တဲ့ အတူတူ ငွေအဆင်ပြေဖို့ လုပ်တာပဲဟာတဲ့ အေကွာလို့ ကျနေိာလဲ တွေဝေးနေတယ် ဒါနဲ့ ညေ မရှက်နဲ့ တာဝန်အရ မေးရတာပါတဲ့ ညေက လိင်တံ ဘယ်လောက်ကြီးလဲ ရှည်တာတွေ အကိုပြောပြ အကို ပိုင်ရှင်ကိုပြောပြမယ်
သူကြိုက်မှ အလုပ်ထဲ ပေးလုပ်ခိုင်တာတဲ့ လိုးရော လိုးနိုင်လားတဲ့ ရပါတယ် အကိုလို့ ကျနော်လီး အရှညိတော့ တစ်ထွာကျော် တယ် ၆လက်၃ .၄.လောက်ရှိတယ်လို့ အေအေဒါဆို မဆိုးဘူးတဲ့ ကဲဒါဆို မနက်ဖန် အကြောင်းပြန်မယ်တဲ့ အလုပ်ရပြီ လို သတ်မှတ်လိုက်တော့တဲ့ ညီလေး လိုးအပ်ရင် မင်းမှုတ်ပေးတာတွေ ရော မှုတ်တတ်တယ် မလားတဲ့ ဒါကတော့ လုပ်ခိုင်ခဲပါတယ်တဲ့ ငွေပိုတောင်းလို့ရတယ်တဲ့ ဒါက မင်းမလုပ်ခြင်လဲ ရတယ်တဲ့ အေပါလို့ ကျနော်လဲ အိမ်ပြန်ပြီ မိန်းမအလုပ်ကို သွားကြိုပါတော့ တယ် မိန်းမအပေါ် သစ္စာဖောက်စလို ဖြစ်ပေမဲ့ ကျနော် ညာ ထားရမှာပဲ ကျနော်နဲ့ ကျနော်မိန်းမ အဆင်ပြေဖို့ စာဝတ်နေရေ အဆင်ပြေက အဓိကပါ မိန်းက အလုပ်ဆင်လို့ ကျနော်ကို မြင်တော့ ပြေပြီ ကျနော်ဆီ ပြေလာပြီ ကျနော်လက်ကလေးကို တွဲလိုက် တယ် အကို စောင့်ရတာ ကြာပြီလာ ဟိုမေး ဒီမေးနဲ့ ကျနော်တော့ ကိုယ်လုပ်မဲ့အလုပ်ကြီး ကြောင့်နောင်တ ရမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ လဲ ငါ့မိန်မပင်ပန်နေတာ မကြည့်ရဲ့ဘူးကွာ ပြီရင် မိန်းမက ချမ်းချမ်းသာ သာ နေလာတဲ့ သူဆိုပေမဲ့ အခုလဲ ကြည့်လေ သူအလုပ်မ ရွေးပဲ မိန်းမကောင်းပီသစွာ သူပါအလုပ် လုပ်တယ် ကျနော်လဲ အလုပ်ရကြောင့်တော့ ပြောရမယ် ဘာအလုပ်လို့ ပြောရမလဲ ဆိုတာ မသိဘူး နောက်တော့ ကျနော် စိတ်ကူပေါက်ပြီး မိန်းမ မိန်းမ အကို နောက်ရက်တွေ ဆို အလုပ်ကောင်းရပြီ လို့ ဟာ ဘာလုပ် လဲ အကိုတဲ့ ငါ သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ ကုန်တင် ကုန်ချ စရင်မှတ်ပေးရမှာလို့ ပြီရင်
တစ်ညကို ၃သောင် လောက်ရမယ်တဲ့ ဟင်ညဘက် လုပ်ရမဲ့ အလုပ်လာတဲ့ ဟုတ်တယ်လေ ချစ်ရဲ့ သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်တွေက ညဘက်မှ ဝင်တာလေးလို့ ဒါပေမဲ့ အကိုတို့ ငွေစုမိရင် အကို အလုပ်ထွက်မှာပါလို့ အင်ပါ ရပါတယိ အကိုရယ် အဆင်ပြေသလို လုပ်ကြတာပေါ့တဲ့ ငါတော့ စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး ဒါပေမဲ့ မလွဲစာဘူးလေ…ငါလဲ ငါ့အိမ်ထောင်ရေအတွက်ပဲ အဲ့ည မိန်းမကလဲ ညဘက်အလုပ် လုပ်ရမယ်ဆိူတော့ သိပ်တော့ လက်မခံခြင် ပေမဲ့ ငါတို့ရဲ့နောင်ရေ လဲ ရှိသေတော့ သူလဲ မတားနိုင်ဘူ မိန်းမရယ် အကို အဆင်ပြေရင် မိန်းမအလုပ်မလုပ်နဲ့တော့ အိမ်မှာပဲနေလို့ အဲ့ည ကျနော်စိတ်ထဲ မိန်းမကို ပစ်ထားပြီ တခြာ မိန်းမတွေ လိုးရတော့မယ် ဆိုတော့ မိန်းမကို သနာမိတယ် အားလဲ နာတယ် အဲ့ည မိန်းမကို ကျနော် ဖက်အိပ်တယ် ပြီရင် မိန်းမကို သုံးချီးလေးချီးလောက် လိုးပစ်တယ် မိန်းမက အရည်ထွက်တာ နည်လာတော့ မိန်းမစိတ်ပါအောင် ကျနော် မိန်းမကို ပေါင်ကို ကားပြီ ကျနော် အဖုတ်လေးတွေကို ပတ်ပြီး လျားလေနဲ့ လျက်ပေးတာ အား….ကို ရေ ငရဲကြီးမယ် မကြီးပါဘူးချစ်ရယ် အကို ချစ်ကို မှုတ်ပေခြငိလို့ပါ ဆို ပြီ ပြွတ်….ပြွတ်….ပြွတ်… အား ကိုရေ အား… အင်း….အင်……ကိုရေ အား ..ကိုရေ တော်ပြီ…..ချစ်မနေတတ်ဘူကွား အာ….အင်….ပြွတ်….ပြွတ်….ကျနော် မိန်းမကို စုပ်ထုပ်တာ ပြွတ်…ပြွတ်…အား အားကိုရေ ချစ်လဲ အကိုကို မှုတ်ပေခြင်တယ် ….. အင်မှုတ်လေးလို့ သူက ကျနောအောက်ကို ဆင်ပြီ ကျနော်လီးကြီးကို ကိုင်ပြီ ပြွတ်းးပြွတ်း ပြွတ်
အားးးးးမိန်းမရယ် ကောင်းလိုက်တာ ချိုလာလို့ အကိုလျက်ကြည့်လေးတဲ့ သူက ကျနော်ကြီး ကို စုပ်နေတာ ပြွတ် ပြွတ်နဲ့ သကြားလုံး စုပ်သလို စုပ်နေတာ ပြွတ် ပြွတ် နဲ့ ငါလဲ ချစ် ကိုကိုခွလိုက်လို့ မိန်းမက ကျနော်ကို မှုတ်ပေ ကျနော်က မိန်းကိူ ဇောက်ထိူးထား ပြီ အောက်ကနေ မှုတ်ပေး ပြွတ်းးပြွတ် ပြွတ် အား အားကိုရေ ကောင်းတယ် ကွား မောင်ရယ် အား အား အင်းအင်း မောင်ရေ ချစ်ထွက်တော့မယ်ထည့်တော့မယ်တဲ့ ထည့်ခြင်သေဘူး ချစ်ဟာလေးကို မှုတ်ခြင်သေတယ်လို့ ဟာ.. ထွက်တော့မှာကိုတဲ့ ကိုကိုပေါ်မှာ မထုပ်ခြင်ဘူး တဲ့ အရည်တွေနဲ့ ညစ်ပတ်ကုန်မယ်တဲ့ ညစ်ပတ် ညစ်ပတ် ဒီတိုင်ထုပ်ချ ကိုကို မှုတိပေမယ်လို့ ပြွတ်းးးပြွတ်းးးပြွတ်းးးအား ကိုရေ ကိုရေ အား ချစ်တအားကို ထွက်ခြင်နေပြီ ကိုကိုရယ် ထည့်တော့မယ် မရ ဘူး ကိုကိုပါစပ်ပေါ် မထုပ်တတ်ဘူး ချစ်ထည့်ပဲထည့်ခြင်တယ်
အား အား အား အားကိုရေ အား အား အား အင်း အင်း ကျွတ်းးးးကျွတ်း ကျွတ်းး အား အား ထည့်တော့ကွာဆို ပြီ ကုန်းထတယ်
ထည့်တော့မယ်တဲ့ ပြီတော့ ကားယာကြီးခွပြီ ကျနော်လီးကြီးကို ကိုင်ပြီ ကျနော်မိန်းမက သူအဖုတ်ထဲ ကို ထည့်ချလိုက်ပါတယ် ဗစ်.ဗစ်ဗြီးးးးး အား ကိုရေးးးးကောငိးလိုက်တာကွား အားအား အားကိုရေ အရမ်းထွပ်ခြင်နေတာ သိလားးး အင်ပါ ထုပ် အားရပါ လုပ်နော်ချစ် ကိုကော့ပေးထားမယ် အား အား ကိုရေ ကောင်းတယ်ကွား အား အား ကိုရေ ချစ် ကိုကိုလီးကြီးကိုကြိုက်လား ရင်းးးအင်းကြိုက်တယ် ကိုကို ဘယ်သူနဲ့မှမဖောက်ပြန်ရဘူး ကိုကိုလီးကြီကို ချစ်က ပိုင်တယ် ချစ်ဟာကို ကိုကိုပိုင်တယ် သိလားးး အင်းပါ ချစ်ရယ် ကိူကို လီးကြီးက ချစ်အတွက်ပဲ နော် အင်ပြီရော အားအား အား အား ကိုရေ ကောင်းတယ်ကွာ အား အား ကိုကို ရေ အားးးးအင်းးး ကိုကိုရေ ချစ်က နာလို့ညာနေတာ အားအား အားအင်း ကိုရေ ကျပ်နေတာပဲကွား လီးက တင်းနေတာပဲ အား အာ ကြိုက်လာချစ် ရင် ရင် အင်ကြိုက်တယ် အရမ်းကြိုက်တယ်းးယယ ကိုကိုကိုအရမ်းချစ်တယ် သိလား အင်ပါ ကိုလဲ ချစ်ကို အရမ်းချစ်တာ အားအား အင်းအင်း အားးအားကျွတ် ကျွတ် ကိုရေ ထိတယ် သိလား ချစ် အထဲထိထိတယ် အားအား ကိုရေ အား အင်းးးအားအား ကျွတ်ကျွတ် ထွက်တော့မယ် ကွာ အား အကိုပြီတော့မလား အား အင်းးအားးးးးးးးးးးကိုရေးးးးးး ဆိုပြီ မိန်းမကလဲ ပြီးငါလဲ ပြီသွားပါတော့တယ်
အားအား အားကိုရယ် ချစ် ပေါင်တွေပါကွနေပြီတဲ့ အင်လို့ ကို ချစ်တို့ဘယ်တော့မှ ကိုယ်ဝန်ရမလဲ မသိ ဘူးနော်တဲ့ ဟာရမှာပေါ့လို့ အခုတောင် ချစ်ဗိုက်ထဲ မှာ ကလေးလေး သေသေလေး ရှိနေလောက်ပြီလို့ ကိုကိုက ဘာလေးလိုခြင်လဲတဲ့ ယောကျာင်္းလေ လို့ အင်းအင်း ချစ်မွေးပေမယ်တဲ့ ချစ်ရောလို့ ချစ်က ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုနဲ့ရတဲ့ကလေး ချစ်တယ် တဲ့ ချစ်မြန်မြန်လိုခြင်နေပြီတဲ့ အင်ပါ ကိုညတိုင်းလိုးပေရငိ ရမှာပေါ့လို့ တစ်တိုးတိုးနဲ့ စကားပြောရင် အိပ်ကြပါတော့တယ် ကျနော်လက်မောင်းလေပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျနော်မိန်းမကိုကြည့်ပြီ ချစ်လိုက်တာကွာ သူအပေါ် စီပွာရေးကြောင့် သစ္စာဖောက်ရမှာ မို့လား မသိ ပိုပြီ သူကိုချစ် လာတယ် မိုးလင်တော့ သူကို အလုပ်ပို့ပေပြီ ကျနော် အလုပ်ထည့်ပေမဲ့ အကို ဆီသွားတော့ အေးအေညီလေလား အဆင်ပြေလာ တဲ့ ငါလဲ ဘာမှန်မသိဘူ ပြေတယ် လို့ ၁၀း၀၀မှ သွားမယ်ကွာတဲ့ ကျနော်တို့ ၁၀း၀၀ထွက်သွာကြကျတာပေါ့ ကျနော်ကို ကားစီရင် ၈မိုင်ရောက်တော့ ဆင်မယ် ညီလေတဲ့ ၈မိုင်မှာဆင်ပြီ အခု ၈မိုင်မော ရဲ့နောက်ဘက်ကျတယ် တိုက်တန်း ၄လွှာပေါ် ခေါ်သွာတယ် ဟိုကျတော့ ရွှေတွေ တွဲလွဲ တွေ ဝတ်ထားတဲ့ အသက်၅၀နီပါ အဖွှာကြီးကို ဟာ မောင်မြင့်သိန်းလာလာတဲ့ ကျနော်ကို ခေါ်လာ တဲ့ သူကို ပြောပါတယ်
ကျနော်ကို သူလာတဲ့ အေဟုတ်တယ် အန်တီတဲ့အေးအေး အဲ့လို အရွယ်ကောင်းလေးတွေ လိူခြင်တာတဲ့ နင်ခေါ်လာရင် အရက်သ မာ ပိန်ညောင်ရိုးကြီးပဲတဲ့ အလုပ်အကိုင်မကောင်းဘူးတဲ့ သူရော အရက်သောက်လားတဲ့ မသောက်ဘူးလို့ အေးကောင်းတယ် မောင်းလေးတဲ့ ဒီအလုပ်က စွမ်ဆောင်ကောင်းမှ ငွေဝင်တာတဲ့ အန်တီနဲ့ သားက စီပွာဖက်ပဲတဲ့ ဒါတဲ့ ငါကိုခေါ်လာတဲ့ သူကို ဒီညပဲ သူကို အလုပ်ဆင် ခိုင်မယ်တဲ့ ရတယ် ရတယ် အန်တီ ဆိုပြီ ကျနော်ကို ထားခဲ့ပါတော့တယ် မိန်းမကတော့ ဒီည အိမ်ဘေးနာကသူ သူငယ်ချင်းဆီ သွားအိပ်ရမှာပါ အဲ့ချိန်း ဖုန်းမကိုင်နိုင်တော့ မိန်းမကို အလွမ်းပြေ တောငိ စကားမပြောရပါဘူး ဒါနဲ့ အန်တီကြီးက ကောင်းလေး မင်းနာမည်က ဘယ်လိုခေါ်လဲ တဲ့ ဟုတ် အန်တီ ကျနော်နာမည် အုပ်စိုးပါခဗျာလို့ အေး မောင်အုပ်စိုး မင်းဆီ မိန်းမ တစ်ယောက်လာရင် အန်တီ ငွေ ၄သောင်းရတယ် အဲ့၎သောင်မှာ အန်တီက ၂သောင်း မင်းက၂သောင်း လို့ ပြီ ရင် နင်အိပ်ရင် သူတို့ ပြီရင် နင်အရည်မထုပ်ပစ်နဲ့ ထိမ်းထား မပီမှမရမှထုပ် နင်နောက်ဆက်တွဲ တွေ မလုပ်နိုင်ပဲ နေမယ်
သိလာတဲ့ ဟုတ်ပဲ့ပါလို့ ပြီရင် မင်ကို မှုတ်တာတွေ ဘာတွေခိုင်းရင် ငွေတောင်တဲ့ နင်းအောက်ဆိုက်ပဲတဲ့ သူတို့အမှုတ်ခံခြင်အောင် လဲ မင်း သူတို့ကို မြူဆွယ်ပေါ့တဲ့ နင်တို့နဲ့ ဆက်ဆံရမှာ သူဠေးမတွေကြီးပဲတဲ့ သူတို့ယောကျာင်္းက မလိူးအားလို့ နင်းဆီးလာမှာတဲ့ မှာစရာရှိတာတွေ မှာပြီ ဒီညတော့ မင်းဒီအဝတ်နဲ့ပဲ ဝင်တဲ့ နောက်နေ့ အကျီ င်္ အဝတ်စာ ကောင်ကောင်း ဝယ်တယ်တဲ့ ဒါအလုပ် အတွက်ပဲတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ ကဲ ရောရောတဲ့ ကျနော်ကို ဆေးခဲလေးတွေ အထုပ်ကလေးနဲ့ပေးပါတယ် အဲ့ဆေးက အိပ်ခါနီးသောက် တဲ့ ပြီရင် မင်းဟာ ထလာလိမ့်မယ် ကြာမယ်တဲ့ သူဆန္ဒကို ဖြည့်ဆီးပေနော်တဲ့ မင်းမှာ မိန်းမရှိလာတဲ့ ရှိတယ် အန်တီလို့ အေးအေး ဒါဆို မင်း အတွေ့အကြုံရှိပြီ သာ တာဝန်ကျေမှာပါလို့ နောက်တော အန်တီက ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ် ဟေ့ သူငယ်ချင်း အသစ်ရောက် နေတယ် ကွတဲ့ မင်းနဲ့ အရင်တွေ့ပေးမလို့တဲ့ ခဏရပ်ပြီ ပုံမှန်းဈေးပါပဲတဲ့ ငါဆီးမှာ ဈေးပြောင်းတာ မရှိပါဘူးတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ ရး၀၀ထိုး တော့ အမကြီး ၃၀ကျော်တော့ ရှိမယ် ရောက်လာတယ်
အမေလေး မထင်ရဲ့စရာကွား ချောလိုက်တာ လေယာဉ်မယ် ကျနေတာပဲ သူက ဒါမျိုလုပ်တာ တကယ်ကို အံဩစရာပဲကွာ အရပ် ဒေါင်ကလဲ ကောင်းနဲ့ အန်တီက ကျနော်ကို သူပဲတဲ့ ကျနော်ကို တချက် ကြည့်ပြီ ငွေ ရှင်းဖို့ လုပ်ပါတယ် ပြီတော့ အန်တီက အဆင့် မြငိ့လာပြီပဲ ချောချောလေးတွေ ရှိတာ ဖွက်ထားတာလာတဲ့ ဟယ်မဟုတ်ပါဘူးဟယ် ဒီနေ့မှရောက်လာတာ အမလဲ သူကိုနင်တို့ အကြိုက်မို့လို့ ချက်ချင်ခေါ်ထားတာတဲ့ ကျနော်ကိုကြည့်ပြီ ဒီမှာမင်းမမ အဆင်ပြေအောင်း လုပ်နော်တဲ့ မင်းမိန်းမ လို့ စိတ်ထဲတွေး လုပ်တဲ့ ကျနော်လဲ ပြုံပြတယ် ဟိုအမကြီကတော့ အမကလဲ တဲ့ ကဲကဲ မောင်းလေ အခန်းထဲ သွားနှင့်တဲ့ အန်တီကြီးက ပြောတော့ ကျနော် အခန်းထဲ ဝင်ပြီ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်းနေပါတယ် ဆေးလဲ သောက်ပြီပြီ အာနိသင်တော့ ပေါ်မလာသေဘူး နောက်တခါးက ကျွီးးးးး ဆိုပြီ မမကြီးရောက်လာပါတယ် မမလာ လို့ တခွန်းတော့ ပြောလိုက်တယ် သူက တခါးကို ဂျိမ်းးးးဆိုပြီ ဂျလက်ခတ်လိုက်တယ် ပြီ တော့ သူဝတ်လာတာက အကျီ င်္အမဲ ဇာအကျီ် ကျနော်ကို ကြည့်ပြီ မောင်လေးက အိမ်ထောင်ရှိလာတဲ့ ရှိတယ်အမလို့ အိမ်ထောင် ကြတာ မကြာသေဘူး လပိုင်ပဲရှိသေတာလို့ အော်တဲ့ နင်မိန်းမသိလာတဲ့ သိဘူးအမလို့ ညာထားရတာပေါ့တဲ့ ဟုတ်အမလို့ ပြီ တော့ မမက သူဆံပင်တွေ ဖျီချလိုက်ပါတယ်
ပြီတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး သူကျယ်သီတွေ ဖြုတ်နေပါတယ် လာလေးမောင်းလေတဲ့ အင်းလို့ဆိုပြီ သူဘေးမှာ ထိုင်းလိုက်ပါတယ် သူက ကျနော်ပေါင်ကို သူပေါင်နဲ့ လာမှီပါတယ် ဒီနေရာမှာ အမတခါလာဘူတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့ ဘရမ်းဘတာတွေတဲ့ အမဖီကိုမ လာဘူးတဲ့ မောင်လေကျတော့ သန့်တယ်နော်တဲ့ ကျောင်းပြီပြီလာတဲ့ မပြီဘူးအမ ကျနော် ၁၀တန်းကျလို့ အလုပ်လာလုပ်တာလို့ ရန်ကုန်မှာ မိန်းမရသွာတော့ ကြုံရာကျပန် အလုပ်လုပ်နေရတာ လို့…ဩော်ဆိုပြီ မောင်လေ အဖော်ဆောင်တာ ကြိုက်လာတဲ့ ဗျာ….ဟင် ကွန်ဒုံလေလို့ အော်မကြိုက်ဘူလို့ ဒါပေမဲ့ အမရဲ့ဆောငိထားတော့ အမဗိုက်မပြီးဘူးပေါ့လို့ အမက မကြိုက်ဘူတဲ့ ရိုးရိုး လုပ်ရတာ သဘောကျတယ်တဲ့ အင်ပါသဘောလို့ အဲ့ချိန် ကျနော်ကလဲ ဆေးသောက်ထာတာ နာရီဝက်ဖြစ်လာတော့ လီးကြီး ကတောင် နေပြီ မမက မောင်လေး အမကို နမ်းလို့ရတယ် နို့တွေ ကိုင် နော်တဲ့ ဟုတ်မမဆိုပြီ ကျနော် သူအကျီ င်္ တွေ ချွတ်ပေးနေ ပါတယ် ကျနော်လီးကလဲ တောင်းနေတာ မမက မောင်လေက သန့်သန့်လေးနော်တဲ့ ကျနော်ကို ထမိန်းတွေ ပါချွတ်ပေးပါတယ် အတွင်ခံအနီးလေး တိုင်းနေနေတာ ကျနော်လဲ မမရဲ့နို့သီးလေးတွေ ကို စုပ်တာပေါ့ ပြွတ်းးးပြွတ်းးးပြွတ်းးးအား မောင်လေး ချစ် တယ်ကွာ သိလား အင်မမ အင် အင်း အင်း ကျနော်ဗိုက်တွေပါ နမ်းတော့ မမက မောင်လေ မမကို မှုတိတာတွေ လုပ်ပေမလာ အမ မုန့်ဖိုပေးမှာပေါ့တဲ့ ရတယ်လေး အမလို ကျနော်က မမကို ဗိုက်တွေ နမ်းရင် ပေါင်ခွ တွေပါနမ်းတော့ အားမောင်ရယ် စိတ်အရမ်းစွပ် တတ်တာပဲ
အာ မောင်လေး အား အား မောင်လေ အမဘောင်ဘီး ချွတ်လိုက်ပါလား တဲ့ သူအတွင်းခံလေးက အနီရောင် အပါးလေ စပန့်သား လေး ဒီဘက်ခါး ဟိုဘက်ခါး ကြိုလေးတွေနဲ့ တန်းဘိုးကြီး အတွင်ခံမှာသိသာတယ် မွှေနေတာပဲ သူဠေးမတွေရဲ့ စောက်ပများ ကျ နော် အတွင်ခံ အပေါ်ကနေ လျားနဲ့ လျက်လိုက်ကျနော်တတွေးနဲ့ သူအတွင်ခံ လေ စိူနေအောင် လုပ် တော့ မမကြီးရဲ့ အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေက အတိုင်သာ ဖောင်းနေတာ တွေ့နေရာပါတယ် ကျနော်လဲ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို အတွင်ဘောင်ဘီးအပေါ်ကနေ ငုံ ငုံပြီ ဆွဲ တာ အားးးအားးအား မောင်းလေ ချွတ်လိုက်ပါလာ ဘောင်ဘီ အားအား အင်းအင်း မောင်လေကောင်းတယ် ကွား အား အား အား နဲ့ ကျနော်ကို သူ အတွင်ခံ ကြိုတွေ ခေါက်ချိုးလေ ချည်ထားတာကို ဖြည်လိုပ်ပါတယ် ကျနော်လဲ အသားလေး အတွင်းခံ နီးနီးလေကို ဆွဲခွာလိုက်တော့ ကျနော် တတွေးတွေနဲ့ မမကြီးရဲ့ အဖုတ်ကြီး စိုးရွဲပြီ အဖြူရည်တွေ ကို မြင်နေရပါတယ်ကျနော်လဲ သူဘောင်ဘီးနဲ့ အတွင်းထိ နှိုက်စုပ်လိုက်တာ အားးးမောင် နားတယ် ဆိုတော့မှာ ပြွတ်းးးပြွတ်းးးပြွတ်းးးပြွတ်ူးး အားမောင်ရယ် မှုတ်တတ်လိုက်တာကွား အားအား ကျွတ်းးးကျွတ်းးးအား အင်း အင်း မောင်းလေရေ အရမ်းကောင်းတာပဲးးးးမှုတ်တာ တော်တယ် ကွား အားးးးအား အားးးအား အာအေမရေးးးအားအားအင်း အင်းကျွတ်းးးချူး ချူးးးအား အသက်ရှုသံတွေလဲ ပြင်နေတာ အား အား မောင်ရယ် လျာလေနဲ့ ကလော်နေတာ အမ အရမ်းခံစားရတယ်ကွား
အား အင်းးးအင်းးးအားးးးးး အားအား အားကောင်းလိုက်တာကွားအားးးး ကျနော်လဲ လီးတောင်နေတာ မောက်နေတာ ဆိူဖာ မို့ပေါ့ ကျမ်ခင်းဆို ကျနော်လီးကြိုးပြီ ဘယ်ဆေးက အတော်မိုက်တာပဲ တောင်တာ လုံးဝပျော့မသွားဘူး အားမောင်ရယ် ကောင်းတယ် ကွား မှုတ်တာ သိပ်တော်တာပဲ အားအား အားအား မောင်ရယ် အမယောကျာင်္းတောင် အဲ့လောက်ကောင်အောင် မလုပ်ပေးဘူးဘူး အားအား မင်းအရမ်းကောင်းတယ်ကွား အား အင်း မောင်လေးရယ် အမဒီတိုင်းထုပ်လိုက်မယ် ရလား အမမုန့်ဖိုများများပေမယ် ပြီမှ လိုးပေလေးတဲ့ အင်ရတယ် အမထုပ်လိူက်လေးလို့ မင်းရောလိုးခြင်နေပြီလာတဲ့ အင်းလို့ ဒါပေမဲ့ အမဒီတိုင်ထုပ်အုံးလေးလို့ အင် ပါဆို ပြီ ပြွတ်းးးပြွတ်းးးပြွတ်းးးအားအား မောင်လေ စောက်စိကို မစုပ်နဲ့ အမအရမ်ကျင်တယ် အား အား အေးအေး အဲ့နှုခမ်းတွေ လျားနဲ့ အထဲထိ စုပ်တာ လျက်တာက ထိတယ် မောင်ရဲ့အင်းးကောင်းလိုက်တာ အင်းးးးမောင်လေရယ် အမြဲသာ အခုလိုခံရရင် ကောင်မှာပဲကွာ အား မောင်လေရယ်
အားအား ဆို အာအားူးးပြွတ်းးးပြွတ်းးးပြွတ်းးးအားးးးးးအားးးးးအားးမောင်ရေ ထွက်ပြီးးးးကွားးးးးအစ်းးးးအစ်းးး အားးးးချူးးးးးး အားအား မောရယ် ဆိုပြီ ကျနော်ခေါင်ကို ကိုင်ပြီ သူစောက်ဖုတ်ကြီကို ခွာချလိုက် ပြန်ကပ်လိုက် လုပ်နေတာ မမကြီ အားအား မောင်ရယ် အရမ်းမှုတ်တတိတာပဲ အား အား ပါစပ်ထဲ ဝင်သွားသေလားတဲ့ အငိးလို့ တကယ်တဲ့ ဟုတ်တယ်လို့ အားအား အားကောင်းချက်ကွာ အမမေ့နိုင်ပါ့မလာကွာတဲ့ ပြီတော့မှ သူကကုန်ထပြီ မင်းရော လီးတောင်နေပြီလာတဲ့ အင်းလို့ ပြတဲ့ ကျ နော်လဲ ပုဆိုလှန်ပြတော့ အိုးးးနည်တာကြီးမဟုတ်ဘူး ရော… ကျနော်လီကြီးကို လက်ကလေးနဲ့ သ ‘နေတယ် အိုးးးမောင်လေ ရယ် ကြီးလှကြီးလာရေ ဟုတ်အမ တောင်နေတာလဲ တင်းနေတာပဲ အကျောတွေကြည့်စမ်း ထနေတာ အထသ်တွေ ဖြစ်နေတာ ဟာမောင်လေး လီးထစ်မပြုတ်သေဘူလာတဲ့ ဖြဲချတယ် ပြးးးး အော်ပြုတ်နေပြီဟ လီးထစ်မပြုတ်သေတဲ့ ပုံကြီးနော်တဲ့ ဟုတ် အမ ကျနော်က လီးအထစ်ကြီတာလို့ ကြည့်ပါလာ အရင်က သေးပြီ ထိပ်ကြီးက ကြီးနေတာ လို့ အေးဟုတ်တယ်နော် မင်းလီးက တမျိုးပဲတဲ့ အသဲယားစရာကြီးတဲ့အားမောင်လေ ဖြည်ဖြည်တော့ လိုးနော် အမ ကွဲထွက်ကုန်မှာစိုးလို့ ခံခြင်တော့ ခံခြင်နေပေမဲံ မင်းက အားကောင်းမဲ ပုံပဲတဲ့ ဟုတ်ဆိုပြီ ကျနော်သူကို နှုတ်ခမ်းတွေ စုပ်ပြွတ်းးးပြွတ်းးး ပြွတ်းးးးကျနော်လီးကြီးနဲ့ ပွတ်ပေနေတာသူ ကို အားမောင်ရယ် အမယားလိုက်တာကွာ အား ထည့်ပါတော့ လာ မောင်ရယ် အား အား မောင်းရယ်
အားထည့်လိုက်တော့နော် မောင် အား ယားနေပြီ အင်ပါ ဆိုပြီ ဗြီးးးးးးအားးးးးးးးးးးမောင် ဖောင်းးးဖောင်းးးးးဖောင်းးးးအားးးးအင် ကျွတ် နာတယ် ကွာကွား အား အား အားးးးးး အင်းးးးအားးးးးမောင်ရယ် မင်းလီးထစ်ကြီးက အမ အတွင်သားတွေ ကို အကုန်ကို ထိ တယ်ကွားးးး နေရာလွတ်ကို မထားခဲ့ဘူး အားးးအားးးးးး ကြိုက်တယ် ကွား လိုးတာလဲ ကြိုက်လိုက်တာကွားးး အားးးးကောင်းလိုက် တာကွားးးးးးအားမောင်းးးရယ်အားးးးးးအားးးမောင်ရယ်းးးး လိုးတတ်လိုက်တာကွားးးးးး ကလေအဖေကြီးကြနေတာပဲးအားးးအင်းးးးအပိုအလိုမရှိအောင် လိုးတတ်တယ် ကွားးးးးအား ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ် အင်းးမောင် ထိတယ် ကွာ အမအရ ကျေနပ်တ ယ်ကွား အား အား မောင်ရော လိုးရတာ ကြိုက်လား အင် မမ မမစောက်ပတ်က လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာကွာ ချွဲပြီ ကျနေတာ အား အား အရည်တွေ ထွက်နေတာအများကြီးပဲ မမ အင်ဟုတ်တယ် မောင်လေ အမက တောက်ခြောက် ထွက်နေတာ မောင်ကိုချစ်မိပီ ကွားးး အားးအားးးမောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ ကွား အမ့ပြီပြန်တွောမယ်ကွား အား အား မောင်ရယ် ထွပ်တော့မယ် ထင်းတယ် အရမ်းကို အထဲမှယားနေပြီ သိလား မောင် ရော အင်း အတူ တူ ထုပ်မယ် အား အားးးး အားးးမောင်းးးးရေးးးးးအားးးး မောင်းအာ မောင် အားးမောင်းးး အားးးမောင် ကြိုက်တယ် ကွာ
အာရပါရလိုးနော် မောင် အား အားအမကော့ပေထားတယ် အားးးးးးအားးးးးးမောင်ရေးးးးးးးး မမကြီးထွက်ခါနီ အော်တာ တခန်း လုံးဟိန်းထွက်နေတာပဲ ကိုယ်တောင်ရှက်တယ် မရဘူး မောင်းရေ ကောင်တယ်ကွား မောင်းရေ အားးးးအားးးမောင်းးးရေ အမပြီပီ ကွားးးးးးအားမောင်ရယ် အားးးးကောင်လိုက်တားးးးကွားးးးး ချစ် တယ် ချစ်တယ် ချစ်တယ် မောင်ရယ်းးး အားးးလိူးတာအရမ်ြိး ကုက်တယ် ကွားးးးးး အားးးးးအတူု တူးးပြီတာ ကောင်းတယ် ကွား လိူးတာကြိုက်တယ် အားးးးအားးးးးးး ဆိုပြီ ကျနော်လဲ ပြီ သူလဲ ပြီ ကျနော်နဲ့ သူ တစ်ယောက်နဲ့ တယောက် ထပ်ပြီ ကျနော်လီးကြီ မမကြီစောက်ဖုတ်ထဲ စိမ်ထာတာ အားအားးးး ကောင်းတယ် ကွားးးးးး မောင်လီးက တောင်နေတုန်ူကွာတဲ့ လီးကြီ ထည့်ပြီ အိပ်ပစ်ခြင်တာတဲ့ ပြီတော့မှ ကျနော် ကျနော်ဖြောင်းးးးးဆိုပြီ ဆွဲနှုတ် လိုက်တာ အားးးးဖြည်ဖြည် နားတယ် မောင့်ရဲ့ သူလဲ အတွင်ခံ ဝတ်တော့ဘူတဲ့ ပိုက်ဆံအိပ်ထဲ ထည့်ပြီ ကျနော်ကို ရောမောင်လေ မုန့်ဖို့ဆိုပြီ ငွေ ၈၀၀၀ပေးပါတယ် အမအချိန်နရလို့ အချိန်ရရင် မောင်ဆီလာအုံမယ်တဲ့ သူအဝတ်တွေ ဝတ်ပြီ ကျနော်ကို ဖက်ပြီ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ဆိုပြီ နမ်းလိုက်တယ် အရမ်းချစ်တာပဲ သိလာ မငိးကိုတဲ့ ကျနော်နဲ့ သူအခန်းထဲ ထွက်ပြီး ကောင်းမလေ မင်းအသံ အပြင်ကပါကြားရတယ်တဲ့ ခ်ခ် ဆိုပြီ ပြန်တော့မယ် အမ ညမ လဲ အားဘူတဲ့ အေးအေး နောက်လဲ အားပေအုံးနော်တဲ့ အခု အဆင်ပြေတယ် မလားတဲ့ ပြေတယ်အမ တဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နဲ့ တောက် တောက် ဆင်းသွားပါတော့ တယ် ကောင်းလိုက်တဲ့ မမကြီ အဖုတ် အခုတော့ သူမဟုတ်သလို လှညိ့တောင်မကြည့်တာ ဝမ်နည်းတယ်
ငါလဲ ကြားဆေးသောက်တယ်တာ ပြောတယ် သူညည်သံက မထိန်နိုင်ဘူး တချိတော့ ထွက်သွားတာပဲ ပြီတော့ အန်းတီ က ကောင်း လေး သွားဆေး ရော့၂သောင်းတဲ့ ကျနော်တစ်ယောက်လိုးရသေတယ် ၂၈၀၀၀ရပြီ ပျော်လိုက်တာ ကဲကဲမြန်မြန်သွား လူမရှိဘူး အလုပ်ဆင်တာ တစ်ယောက်ပဲလာတယ် ငွေရမဲ့အလုပ်မလုပ်ခြင်ကျဘူး အဲ့ကောင်တွေ နောက်နေ့လာကြည့် ငါနှင်လွတ်မှာတဲ့ အော်နေလေးရဲ့ အန်တီ မမကြီးက မင်းတို့နှစိယောက်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်တဲ့ ငါ့အလုပ်ဖော်လဲမတွေ့ဘူးသေဘူး ကဲသွားသွား တစ် ယောက်စောင့်နေတယ် သူအဖော်က ပြီတော့မယ် နင်လုပ်တာကြာတယ် သူတို့က တစ်ချီပဲ လုပ်တာ အကြာကြီမလုပ်နဲ့ လီးကိုစိမ် စိမ်မထားနဲ့ တဲ့ အော်တယ် ငါပါကျနော် ရေဆေးပြီ ထွက်လာတော့ အခန်းထဲ လှမ်းအော်တယ် သန့်ရှင်ရေ ကောင်မလေးကို သန့် ရှင်ရေ ပြီပြီလာ လူဝင်မယ် တဲ့ကောင်မလေ ထွက်လာတယ် ppအန်တီတဲ့ ကဲ အမ ဝင်တော့တဲ့ စောင့်ရတာ အားနာတယ်တဲ့ အဲ့ ကောင်လေ လူသစ်တဲ့ အဖွှာကြီကြည်တော့ အသက်က ၅၀ဖြစ်နေပြီ
အခန်ထဲရောက်တော့ ငါကလီးတောငိလို့သာ လိုးပေတာ ပေါင်တွေလဲ ပရေတွန့်နေတာ အဖုတ်ကြီလဲ အမွှေမရှိတွန့်လိမ်နေတာ ငါ လဲ မြန်မြန်ပြီ ပြီရောဆိုပြီ စောင်တာဖောင် ဖောင် ဖောင် ဖောင် ဖောင် အားးးအားး ကောင်းလေး ကောင်းတယ် ကွာ ကောင်လေး အား အားကောင်းလေး အား အား အား ကောင်လေ အားးးးးးအားး အောင်းးးကောင်းတယ်ကွားးးး အားလီးကြီးမျော့လီးကြီးပဲ အားးးးအန်တီးအရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ အားးးးအားးး အားးးကောင်းတယ် ဖောင်းးးးဖောသ်းးးးးဖောင်းးးး အားအားးးးးးထွက်ပြီကွား ပြီပြီ အားအားအားး ကောင်းလေတော် ပြီ တေိာပြီ အရမ်းကြမ်းတယ်ကွာ အန်တီနားတယ် အရမ်းစောင့်တာ မခံနိုင်ဘူး အားအား နဲ့ လီးကြီကြည့်ပြီ လူနဲ့မလိုက်ဘူ လီးက ဒီအရွယ်ကို အဲ့လို အတင်ကြီး စောင်လိုးတာ သေပြီပေါ့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ထမိ န်ကြီ ကိုင်ပြီ ထွက်လာတယ် အန်တီကလဲ ဘာဖြစ်လဲ မေးတော့ နင်းကောင်းမေးကြည့်တဲ့ သူလဲ စိတ်တို့ပြီ ပြန်သွာ အမွှာ ကြီ မင်း ဘာလုပ်လိုက်လဲတဲ့ ဘာမှမလုပ်ဘူ စောင့်စောငိ့လိုးတာ နားလို ညင်ညင်သာမရှိဘူး ဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ် ဆိူပြီ ထွက်လာတာလို့ သူ ပြီးလာတဲ့ အမှန်တော့ ကျမ ပြီးသွားခဲ့တာကြာပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged သစ်စာမဖောကျခွငျးသျောလညျး ဖောကျရခွငျး